မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရှိစိတ်ခွန်အားနိုးမှုစနစ်များ - မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်အခြားစွန့်စားနိုင်သောအပြုအမူဆိုင်ရာအသက်အရွယ်ကွဲပြားမှုများအတွက်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောသက်ရောက်မှုများ (၂၀၁၀) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌လှုပ်ရှားမှု
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်စိတ်ခွန်အားနိုးစနစ်များ: ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်အခြားအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပြုအမူတွေအတွက်အသက်အရွယ်ကွဲပြားခြားနားမှုဘို့ဖြစ်နိုင်တဲ့သက်ရောက်မှု (2010)
ဦးနှောက် Cogn ။ 2010 ဖေဖော်ဝါရီ; 72 (1): 114-23 ။ EPub 2009 စက်တင်ဘာ 16 ။
Doremus-Fitzwater TL, Varlinskaya EI, လှံကို LP သို့.
ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ, စိတ်ပညာဌာန, Binghamton တက္ကသိုလ်, Binghamton, နယူးယော့ 13902-6000, အမေရိကန်နိုင်ငံအဘို့အရေးစင်တာ။
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကျယ်ပြန့်နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေမျိုးစိတ်ကိုဖြတ်ပြီးဟော်မုန်း, ဇီဝကမ္မ, အာရုံကြောများနှင့်အမူအကျင့်ကိုပြောင်းလဲထင်ရှားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာတစ်ရပ် evolutionarily ရှေးရိုးစွဲဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ, ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်, သူတို့ရဲ့လူ့ counterparts တွေကိုကဲ့သို့ peer-ညွှန်ကြားလူမှုရေးအပြန်အလှန်အတွက်ပြပွဲမြင့်တက်, အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေ / အသစ်အဆန်းရှာနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အရက်သေစာအသုံးပြုမှုဆွေမျိုးလူကြီးများမှ, စိတ်ခွန်အားနိုးနှင့်ဆုလာဘ်-related ဦးနှောက်ဒေသများတွင်သိသာသောအပြောင်းအလဲများနှင့်အတူ။ ဤအအကြောင်းအရာများပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးနောက်, ပစ္စုပ္ပန်စက္ကူကဤလှုံ့ဆော်မှုများ၏ဆန္ဒရှိဂုဏ်သတ္တိများမှလျော့နည်းထိခိုက်မခံစဉ်, အမျိုးမျိုးသောမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်သဘာလှုံ့ဆော်မှုများ၏အပြုသဘောဆောင်ကြိုးဂုဏ်သတ္တိများမှလူကြီးများထက် ပို. အထိခိုက်မခံဖြစ်မြီးကောင်ပေါက်ဖေါ်ပြခြင်းအေးစက် preference ကိုနှင့်ခြင်းကိုမနှစ်သက် data တွေကိုဆွေးနွေးထားပါတယ်။ သဘာဝကဆုလာဘ်ကို အသုံးပြု. ဆုလာဘ်-related အပြောင်းအလဲနဲ့၏တိကျသောအစိတ်အပိုင်းများကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာမှုမှဒီဇိုင်းအပိုဆောင်းစမ်းသပ်ချက်လျော့နည်းအပြုသဘော hedonic ထိခိုက်စေခြင်းလေ့လာမှုများနှင့်ဤအသက်အရွယ်မှာလျော့ချမက်လုံးပေး salience နှင့်အတူခြားနားမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဆန်တဲ့အပြုသဘော hedonic sensitivity ကို၏အစီရင်ခံနှင့်အတူ ပို. ရောထွေးတွေ့ရှိချက်လြှော့ပါပြီ။ ဆယ်ကျော်သက်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုဤတွေ့ရှိချက်များ၏သက်ရောက်မှုကိုဆှေးနှေးပါလိမ့်မည်။
keywords: မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်, တိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်လှုံ့ဆျောမှု, ဆုလာဘ်, မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တခါတရံခံစားချက်နှင့်အပြုအမူမြားတှငျပွောငျးလဲသပိတ်မှောက်အတူလျင်မြန်စွာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတစ်ခုအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တစ်ခါတစ်ရံလူသားဖွံ့ဖြိုးမှု၏ထူးခြားတဲ့အဆင့်အဖြစ်စဉ်းစားသော်လည်း, ရှိသမျှနို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေမျိုးစိတ်များ၏ဖွံ့ဖြိုးဆဲသက်ရှိလွတ်လပ်ရေးပေးရန်မှီခိုနေတဲ့အလားတူအကူးအပြောင်းကတဆင့်သွားပါ။ အမှန်စင်စစ်လူ့မြီးကောင်ပေါက်နှင့်အခြားမျိုးစိတ်မှာသူတို့ရဲ့ counterparts တွေကိုဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲအမူအကျင့်လက္ခဏာများနှင့်ဦးနှောက်အသွင်ပြောင်း (များတွင်မြောက်မြားစွာတူညီဝေမျှလှံ, 2000), ဆုလာဘ်-related circuitry မြားတှငျပွောငျးလဲအပါအဝင် (Ernst & လှံ, 2008), ဤအဆယ်ကျော်သက်-ပုံမှန်လက္ခဏာများအစိတ်အပိုင်းအတွက်ခက်ခဲ-ကြိုး, evolutionarily Sculpt စနစ်များကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်း။
အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေ, အာရုံခံစားမှုနှင့် / သို့မဟုတ်အသစ်အဆန်းရှာထဲမှာရွယ်တူများနှင့်တိုးနှင့်အတူတိုးမြှင် interaction ကအပါအဝင်ဆယ်ကျော်သက်-ဝိသေသအမူအကျင့်စသောအပြောင်းအလဲမျိုးစိတ်အမျိုးမျိုးဖြတ်ပြီးထင်ရှားဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ထင်ရသောအသစ်သောနယ်မြေများကိုရှာဖွေဖို့တွန်းအားပေးခွငျးအားဖွငျ့ထွက်ခွာသွားလွယ်ကူချောမွေ့ရန်အစိတ်အပိုင်းအတွက်ပြောင်းလဲကြပါပြီ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များနှင့်အစားအစာအသစ်များကိုသတင်းရင်းမြစ် (လှံ, 2000, 2007a) ။ ဘုံဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဖိအားအချို့က Shared အပြုအမူ attribute တွေပြမှမျိုးစိတ်အတော်များများ၏မြီးကောင်ပေါက်ဦးဆောင်သောအတိုင်းအတာအထိဤအမူအကျင့်ဆင်တူရိုးမှားအလွန်အမင်းထိန်းသိမ်းထားမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအထူးသဖြင့်တခုတ်တရအပြောင်းအလဲများလျှက်ဦးနှောက်ဒေသများနှင့်အတူအလားတူနောက်ခံဇီဝအလွှာ, ရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်။ evolutionarily ရှေးခေတ်ဦးနှောက်စိတ်ခွန်အားနိုးစနစ်များနှင့်ဆုလာဘ်-related neurocircuitry အတွက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း ALTER ဆယ်ကျော်သက်-ပုံမှန်အမူအကျင့်လက္ခဏာများ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအတွက်အထူးအရေးပါအခန်းကဏ္ဍလိမ့်မည်။
လူ့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏ကြွယ်ဝသောရှုပ်ထွေးမှာအကောင်းဆုံးသာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက်လုပ်ပါတယ်နိုင်ပါတယ်နေစဉ်, အပျော်အပါးနှင့်ဆုလာဘ်-လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူပြောင်းလဲပစ်အာရုံကြောဒေသများလူသားမြားသညျနှငျ့အခွားသောနို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေမျိုးစိတ် (အကြားစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာတူ၏အပြစ်ကိုခံBerridge & Kringlebach, 2008) ။ ဤရွေ့ကားတူညီကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောမျက်နှာသည်နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အရက်သေစာအသုံးပြုမှုအပါအဝင်ဆုလာဘ်-related အပြုအမူတွေကိုလေ့လာစူးစမ်းဖို့တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ၏အသုံးပြုမှုများအတွက်တရားဝင်မှုတည်ဆောက်ရန်။
မြီးကောင်ပေါက်ကိုမကြာခဏသူတို့တုံ့ပြန်နှင့်သူတို့၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အဓိပ္ပါယ်ရှိသောလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူအပြန်အလှန်လမ်းငယ်ရွယ်သောသို့မဟုတ်အထက်တစ်ဦးချင်းစီအနေဖြင့်အထူးသကွာခြား။ ထိုသို့သောဆယ်ကျော်သက်-ပုံမှန်လက္ခဏာများရွယ်တူ, အသစ်အဆန်းရှာ / အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေနှင့်သူတွေရဲ့စားသောက်အပြုအမူတွေကို (နှင့်အတူအပြန်အလှန်ထဲမှာမှတ်သားမြင့်တက်ပါဝင်သည်လှံ, 2000, 2007a) ။ ဤအ interaction ကအရွယ်ရောက်သူတို့တွင်အသူတို့တွေလုပ်ပေးထက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းနှင့်အပြုအမူအပေါ်တစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကွိုးစားအားထုမှအစအတူမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအထူးသဖြင့်အရေးကြီးသောဖြစ်လာရွယ်တူချင်းအတူ interaction က, (Gardner & Steinberg, 2005; Grosbras et al ။ , 2007; Steinberg, 2005) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းလူသားကိုအခြားဖွံ့ဖြိုးရေးကာလ (အချိန်ထက်ရွယ်တူတွေနဲ့အပြန်အလှန်ပိုပြီးအချိန်ပေးHartup & Stevens, 1997), နှင့်ဤဆက်ဆံရေး (ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်အပြုသဘောအတှေ့အကွုံသိသိသာသာအရင်းအမြစ်ပေးဘရောင်း, 2004; LaGreca et al ။ , 2001, Steinberg & Morris, 2001) ။ ပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ရှုဘို့ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး (ထိုကြွက်များတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်သော 28 မှအလားတူပင်အသက်ကြားကာလအတွင်းမှာ postnatal လက်ထက် မှစ. (P), 42 လှံ, 2000), ကြွက်အငယ်နှင့်အထက်တိရိစ္ဆာန်များထက်လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုအဆင့်မြင့်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ လူမှုရေး interaction ကဤမြင့်မားအထူးသဖြင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်ကစားတိုက်ပွဲများဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာနေကြတယ်, လူကြီးများတွင်တွေ့မြင်လူမှုရေးအပြန်အလှန်၏ပိုပြီးအလယ်အလတ်ပမာဏ (တွေ့မြင်လွှမ်းမိုးထားတဲ့လူမှုရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှမတူဘဲ Vanderschuren et al ။ , 1997 ကိုးကားခြင်းနှင့်သုံးသပ်ချက်; Varlinskaya & လှံ, 2002, 2008) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရောက်ထက်ပိုလူမှုရေးအပြန်အလှန်ထဲမှာထိတွေ့ဆက်ဆံမသာ, ဒါပေမဲ့သူတို့ (ဤလူမှုရေး interaction ကထူးထူးခြားခြားကြိုးရှာတွေ့ဒေါက်ဂလပ် et al ။ , 2004).
အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေနှင့်အသစ်အဆန်းရှာထဲမှာတိုးမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏အခြားအတော်လေးထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအမူအကျင့်လက္ခဏာများဖြစ်ကြသည်။ အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေသည့်အပြုအမူအတွက်မှတ်သားလောက်တိုး (အရွယ်ရောက်သူထက်ပိုပြီးအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်မြီးကောင်ပေါက်နှင့်အတူငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အကြားရှုမြင်ကြသည်Steinberg, 2008) ။ လူ့မြီးကောင်ပေါက်အကြားအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပြုအမူတွင်ဤတိုး (အလားအလာဆုလာဘ်မှီဖို့မျိုးစုံအသစ်နှင့်ပြင်းထန်သောလှုံ့ဆော်မှုတွေ့ကြုံခံစားဖို့လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်Arnett, 1994; Trimpop et al ။ , 1999; Steinberg, 2005) ။ အသစ်သောအတွေ့အကြုံများအထဲကရှာဒါကလှုံ့ဆျောမှု, အပြုအမူရှာကြံဆိုလိုသည်မှာအသစ်အဆန်းတစ်ခုကလက်ရှိနှင့်အနာဂတ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမှသိသိသာသာပံ့ပိုး, မျိုးစုံမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုများနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်အလွဲသုံးစားမှု (အဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးHittner & Swickert, 2006; ကယ်လီ et al ။ , 2006).
တုံ့ပြန် Enhanced အသစ်အဆန်း (စမ်းသပ်ဆဲ Paradigm တစ်အရေအတွက်ကသူတို့ကပိုရင့်ကျက် counterparts တွေကိုမှဆွေမျိုးဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်ထဲမှာရှိသကဲ့သို့ကောင်းစွာသရုပ်ပြခဲ့ပြီးAdriani et al ။ , 1998; Adriani & Laviola, 2000; Beluzzi et al ။ , 2004; Caster et al ။ , 2007; Collins & Izenwasser, 2004; ဒေါက်ဂလပ် et al ။ , 2003; Philpot & Wecker, 2008; လှံ & ဘရိတ်, 1983; Stansfield & Kirstein, 2006ဒါပေမယ့်လည်းတွေ့မြင် Cao et al ။ , 2007; Caster et al ။ , 2005) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကွာမိဘများအနေဖြင့်ရှင်သန်မှုအသစ်ကျွမ်းကျင်မှုလေးလည်းနေတဲ့အချိန်ကြောင်းပေးထား, ပိုကောင်းအသစ်အဆန်းရှာ evolutionally ဝတ္ထုဒေသများ၏ရှာဖွေတူးဖော်ရန်ပံ့ပိုးခြင်းနှင့်အစားအစာအသစ်များကိုသတင်းရင်းမြစ်ကိုရှာဖွေဖို့အခွင့်အလမ်းပေး, ဒီဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကာလအတွင်းယင်း၏သပ္ပါယ်တန်ဖိုးကိုများအတွက်ထိန်းသိမ်းထားပြီစေခြင်းငှါ, ရေနှင့်အိမ်ထောင်ဖက် (လှံ, 2000).
လူမှုအချက်များအရေးပါသောလူ့မြီးကောင်ပေါက်အတွက်အသစ်အဆန်းမှတုန့်ပြန်အတွက်အခန်းကဏ္ဍအဖြစ်ကတခြားမျိုးစိတ်မြီးကောင်ပေါက်ကစား။ လူသားမြားသညျတှငျ, လူမှုရေးညီညွတ်မှု, သက်တူရွယ်တူ deviance နှင့်လူမှုရေးထောက်ပံ့မှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအသစ်အဆန်း-ရှာခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေ (မာတင် et al ။ , 1995), အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေနှင့်အန္တရာယ်များဆုံးဖြတ်ချက်ချအပေါ်သက်တူရွယ်တူသက်ရောက်မှုလူကြီးများထက်မြီးကောင်ပေါက်အကြားပိုမိုအားကောင်းဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ (Gardner & Steinberg, 2005) ။ အသစ်အဆန်း၏အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောဂုဏ်သတ္တိများ (အဖြစ်ကောင်းစွာဆုလာဘ်၏ကြွက်လေ့လာမှုများအတွက်ဆယ်ကျော်သက်-တိကျတဲ့အတွက်လူမှုရေးဆင်းရဲချို့တဲ့သဖြင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု (နှင့်လိင်-တိကျတဲ့) နည်းလမ်းများရှိပါသည်ဒေါက်ဂလပ် et al ။ , 2003).
အနည်းဆုံးအရက်နှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများအချို့ကိုစမ်းသပ်အသုံးပြုမှုကိုကဒီအသုံးပြုမှုဖြစ်ကောင်းအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေသည့်အပြုအမူ၏ဥပမာတစ်ခုထင်ဟပ်အတူမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းမှာလည်းဘုံဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ, 2007 ၏အနာဂတ်လေ့လာမှုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအတွက်အထက်တန်းကျောင်းကျကွီးရှယျအိုမြား၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 50% (မိမိတို့၏တစ်သက်တာကာလအတွင်းတစ်ဦးတရားမဝင်မူးယစ်ဆေးကိုသုံးပွီးသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်Johnston et al ။ , 2008) ။ အရက်၏မကြာခဏနှင့်အလွန်အကျွံအသုံးပြုမှုကိုခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 25th တန်းကျောင်းသူလေး၏ 12% အတိတ်တစ်လအတွင်းမူးရူးသောက်စားတစ်ခုဇာတ်လမ်းတွဲသတင်းပို့အတူမြီးကောင်ပေါက်အကြားအထူးသဖြင့်ကျယ်ပြန့်သည်။ အရေးကြီးတာက, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အရက်သေစာသုံးစွဲခြင်း (လူကြီးအတွက်မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်ပြဿနာများ၏တစ်ဦးတိုးလာဖြစ်ပွားမှုနှင့်အတူပတျသကျပြထားပြီးDeWit et al ။ , 2000; ပေးသနား et al ။ , 2001) ။ အလားတူပဲ, ကြွက်များတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏ရိုးရှင်းတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်သုံးပြီးကျနော်တို့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရောက် (ပြုပါထက် 2-3 ဆပိုအီသနောသောက်သရုပ်ပြပါပြီBrunell & လှံ, 2005: Doremus et al ။ , 2005, Vetter et al ။ , 2007), အီသနော၏ဆိုးရွားသောနှင့် incapacitating သက်ရောက်မှုအချို့မှ၎င်းတို့၏အာရုံမခံစားနိုင်သောဖို့ထင်ရသောကြောင့်တစ်စိတ်တစ်ဒေသအတွက် (ကြည့်ရှု လှံ & Varlinskaya, 2005 ကိုးကားခြင်းနှင့်သုံးသပ်ချက်) သည်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏ပုံမှန်သည့်အမူအကျင့်စရိုက်များတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရွယ်တူချင်းဖိအား (အတူမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အရက်သေစာသုံးစွဲခြင်း၏ဤစတင်အထောက်အကူပြုကြောင်းဖွယ်ရှိသည်Segal & Stewart က, 1996) နှင့်ပိုပြီးစိတ်အေးလက်အေးလူမှုရေး interaction ကအတှကျအလိုဆန္ဒ (Smith က et al ။ , 1995) ဖွယ်ရှိသည်ဤဖွံ့ဖြိုးရေးကာလအတွင်းလူ့မြီးကောင်ပေါက်အကြားအရက်သေစာစားသုံးမှုမှပံ့ပိုး။ ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်အဖြစ်ကောင်းစွာအီသနော၏အလယ်အလတ်ဆေးများကိုအောက်ပါလူမှုရေး interaction ကတစ်ကြံ့ခိုင်တိုးပြမြီးကောင်ပေါက်နှင့်အတူအီသနောနှင့်လူမှုရေးအပြုအမူများအကြားတစ်မူထူးခြားသောဆက်ဆံရေးမျိုး, လူကြီးများအကြားတွင်မသိမမြင်ရကြောင်းအီသနော-သွေးဆောင်လူမှုရေးပံ့ပိုးကူညီ (ကိုပြသVarlinskaya & လှံ, 2002, 2006, 2007).
အတူတူခေါ်ဆောင်သွားဤတွေ့ရှိချက်လူ့မြီးကောင်ပေါက်အကြားကိုတှေ့မွငျသောသူတို့အားကြွက်ဝက်ဝံတူညီမှုအတွက်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်၏ရိုးရှင်းတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိအခြေခံဆုလာဘ်-related အပြုအမူတွေ၏နံပါတ်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဤအားကောင်းတဲ့လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတွေဖွယ်ရှိ, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအတွက် evolutionarily ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးဦးနှောက်ဧရိယာများတွင်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအသွင်ပြောင်းစိတ်ခွန်အားနိုးနှင့်ဆုလာဘ်ဖြစ်စဉ်များကိုထိန်းညှိ, အရာယခုကြှနျုပျတို့ကိုဖွင့်မယ့်ခေါင်းစဉ်ကိုထင်ဟပ်။
II ကို။ ရှယျခကျြနဲ့ဆုကြေးစနစ်၏ Neurobiology
အတော်လေးရှေးခေတ်ဦးနှောက်ဒေသများ, ခွေငျးငှာအလိုရှိသောထွက်ရှာဖွေလျက်တည်နေရာနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာ, အသစ်အဆန်းများနှင့်လူမှုရေးလှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်သဘာဝကဆုလာဘ်ခံစား၏အခြေခံ, ရှင်သန်မှု-မှီခိုလှုပ်ရှားမှုများဖျန်ဖြေ။ ဤရွေ့ကားဆုလာဘ်စနစ်များလည်းမူးယစ်ဆေးမှီခိုများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအထောက်အကူပြုထိုကဲ့သို့သော "supranormal" မူးယစ်ဆေးလှုံ့ဆော်မှုဖို့ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှုနှင့်အတူဒါကြောင့်ဖြစ်ကောင်းသညျ့, အရက်နှင့်၎င်းတို့၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်အသုံးပြုသည်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့် activated နေကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောဆုလာဘ်-related neurocircuitry ၏အဓိကဒြပ်စင်ရှည်နျူကလိယ accumbens (NAc) နှင့်က midbrain ၏ ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) တွင် DA ဆဲလ်အသေကောင်ထံမှလက်ခံရရှိသည့် dopamine (DA) input ကိုမှစွပ်စွဲခဲ့သည်။ အကျိုးကို circuitry ၏အပိုဆောင်းအရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းများကို (dorsal striatum နှင့် input ကိုနှင့်အတူက midbrain substantia nigra အတွက် DA ဆဲလ်အသေကောင်ထံမှလက်ခံရရှိသည် amygdala, hippocampus နှင့် prefrontal cortex (PFC) အပါအဝင် VTA ထံမှ DA ပရိုဂျက်၏အခြား forebrain ပစ်မှတ်များပါဝင်ပါသည် နီးကပ်စွာအပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်သောဤ mesolimbic နှင့် mesocortical ဦးနှောက်ဒေသများနှင့်အတူ SN) (ဆိုလိုသည်မှာအဆိုပါ nigra-striatal DA စနစ်က), (ဥပမာတွေ့ Berridge, 2004).
ဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်လေ့လာမှုများ, သဘာဝဆုလာဘ်များနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများဆီသို့ဦးတည် motivationally oriented အပြုအမူတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမတူကွဲပြားမှုသို့ partitioned နိုင်တခါတရံထပ်ရှုပ်ထွေးနှင့်အတူအသီးအသီးထုတ်ဖော်ပြသနှင့်မလုံလောက်မှု, အာရုံကြောကိုယ်စားပြု (ဥပမာနားလည်သဘောပေါက်ပါပြီ Baxter & Murray, 2002; Cardinal et al ။ , 2002) ။ အဲဒီမှာဆက်လက်အငြင်းပွားဖွယ်ရာဥပမာ (ဆုလာဘ်-related ဖြစ်စဉ်များသရုပျခှဲရပါမည်ကိုမည်သို့၏တစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံ, ဤသီးခြားလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်တိကျသောအာရုံကြောအစိတ်အပိုင်းများ၏အခန်းကဏ္ဍနှင့်စွဲလမ်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုနေစဉ်အတွင်းအလုပ်မဖြစ်ဖြစ်လာသောမဲဆန္ဒနယ်မှ၏ဖော်ထုတ်ခြင်းအဖြစ်သို့သော်ဖြစ်ပါသည်, ကြည့်ရှု Berridge, 2007) ။ ဥပမာ, တဦးတည်းသြဇာသီအိုရီအမြင်များ DA စီမံချက်များအလှည့်မူးယစ်အတွက်မြင့်တက်အားပေးအားမြှောက်ပြုလုပ်သည့်သဘာဝနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်မှ sensitivity ကိုတစ်ဦးကျဆင်းခြင်းမှဦးဆောင်အထပ်ထပ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုတစ် hypo-DA ပြည်နယ် inducing အတူဆုလာဘ်၏ hedonic သက်ရောက်မှုဖြန်ဖြေဘို့အဖြစ်ဝေဖန် forebrain မှ ဥပမာ (ဒီမလုံလောက်တန်ပြန်ရန်ကိုသုံး Volkow et al ။ , 2007) ။ ဒါဟာအယူအဆမှဆုချ-related လှုံ့ဆော်မှုမက်လုံးပေး salience များ၏ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုအဘို့အရေးပါနှင့်ဤအရပ်မှစိတ်ခွန်အားနိုး drive ကိုဤ DA စီမံချက်များရှုမြင်ကြောင်းအခြားထင်ရှားတဲ့ရှုထောင့်ကနေလှသောကွဲပြားခြားနားလျက်ရှိ၏ ဒီသီအိုရီကို ( "လို" အပြုအမူသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးတဏှာတိုးမြှင့်ဖို့ဦးဆောင်ထပ်ခါတလဲလဲမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု DA sensitivity ကိုတိုးပွါးကြောင်း positsရော်ဘင်ဆင် & Berridge, 2003) ။ ဒီရှုထောင့်အရ, DA တစ်ဦးကြိုးနှိုးဆွဖို့ hedonic, အကျိုးသက်ရောက်စေတုံ့ပြန်မှု (ဆိုလိုသည်မှာ "အကြိုက်" တုံ့ပြန်မှု) ဖြန်ဖြေဘို့အရေးပါမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီအစား, ထိုကဲ့သို့သော "ကဲ့သို့" တုံ့ပြန်မှုအမျိုးမျိုးကိုသေးငယ် opioid နှင့် cannabinoid-အထိခိုက်မခံအခြား neurochemical စနစ်များအားဖြင့်ညှိနှိုင်းနေကြသည်အပြုသဘော hedonic ၏ "ပူအစက်အပြောက်" (ပု NAc နှင့် ventral pallidum ၏ဝေမျှအတွင်းထိခိုက်စေSmith & Berridge, 2005).
အခြားသူများကိုတစ်ဦး "အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရလဒ် DA လွှတ်ပေးရန်နှင့်အတူ, DA ဆုလာဘ်သင်ယူမှု" တွင်နေမှုကိုချေဖျက် "အတွက်, ဒါမှမဟုတ်ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းအတွက်အမှားအယွင်းများဖော်ထုတ်မယ်များအတွက်အရေးပါကြောင်းအကြံပြုသုတေသနကိုးကားပြီးဆုလာဘ်အကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက် circuitry အတွက် mesolimbic DA ပရိုဂျက်၏အရေးပါမှုကိုအာရုံစိုက်ခဲ့ကြ တစ်ဦးခန့်မှန်းဆုလာဘ်ပေးခံသောအခါသစ်ကိုသင်ယူမှုအတွက် "အချက်ပြဆုံးမဩဝါဒပေး (ကြည့်ရှု Hollerman et al ။ , 2000; Berridge, 2007,) ပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်ကိုးကားသည်။ ထိုသို့သောဆုလာဘ်-based သင်ယူမှု (ဆိုလိုသည်မှာယင်း NAc) နှင့် dorsal striatum (ဥပမာ nigrostriatal DA သည့်စနစ်) (ထံမှ striatum ၏ ventral အစိတ်အပိုင်းများကိုနှစ်ဦးစလုံးထံမှ afferents နှင့် efferents ပါဝင်သော neurocircuitry ပါဝင်မှထင်နေသည်Meredith et al ။ , 2008တိုကျရိုကျ cortex ၏), အ amygdala တို့နှင့်အတူ, hippocampus, နှင့်တိုင်းဒေသကြီး (ဥပမာကိုကြည့်ပါ Berridge & Kringelbach, 2008).
III ကို။ စိတ်ခွန်အားနိုးနှင့်ဆုလာဘ်စနစ်များအတွက်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဦးနှောက်အသွင်ပြောင်း
function ဆုချ-သက်ဆိုင်ရာမှလူကြီးများအတွက်လှုံ့ဆော်မှု hedonic တန်ဖိုးမက်လုံးပေး salience, သင်ယူခြင်းနှင့်ဆွေမျိုးစိတ်ခွန်အားနိုးအရေးပါမှုကို attribute မှအစေခံကြောင်းစနစ်များသို့စည်းရုံးနေကြသည်ကိုဘယ်လိုကွဲပြားခြားနားသော forebrain ဆုလာဘ်စနစ်များအစိတ်အပိုင်းများအဖြစ်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအငြင်းပွားဖွယ်ရာပေးသောကြောင့်ပင်လျော့နည်းကြောင်းအံ့သြစရာဖြစ်မနေသင့် မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းထိုအဆုလာဘ်-based စနစ်လုပ်ငန်းဆောင်တာအကြောင်းကိုလူသိများ။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသည်အဘယ်သို့, သို့သော်, အထူးသဖြင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများကိုမှတ်သားခံယူဦးနှောက်နှင့်၎င်းတို့၏ neurocircuitry ၏ဆုလာဘ်-related ဒေသများဖြစ်ပါတယ်။
မကြာမီကဒေတာသည်ဤဆုလာဘ်-သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးများအကြားဆက်သွယ်မှုကိုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအသေးစိတ်ရှင်းလင်းခံရဖို့ဆက်လက်ပြသခဲ့ကြသည်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှတဆင့်နှင့်လူငယ်လူကြီးသို့ဆက်လက်တိုကျရိုကျ cortical တိုင်းဒေသကြီးများ၏အတော်လေးနှောင့်နှေးဖှံ့ဖွိုးတိုးနှင့်ကိုက်ညီ (ကြည့်ရှု လှံ, 2007b), အ PFC နှင့် subcortical ဆုလာဘ်-related ဒေသများချိတ်ဆက် neurocircuitry ထိုနည်းတူဤကာလအတွင်းမှတဆင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ရောက်နေပါတယ်။ ဥပမာ, PFC ဖို့ basolateral amygdala ကနေ glutaminergic Project (မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်အသေးစိတ်ရှင်းလင်းခံရဖို့ဆက်လက်Cunningham et al ။ , 2008), PFC မှခြုံငုံ Synaptic သိပ်သည်းဆနှင့် excitatory drive ကို (ကြည့်ရှုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအထူးသကျဆင်းသော်လည်း လှံ, 2007b,) ပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်ကိုးကားသည်။ PFC အတွက်ရပ်စဲ DA အမျှင်အရေအတွက်မှာလည်း (မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်သို့တိုးပွါးဂိ et al ။ , 2000), PFC လှုပ်ရှားမှု၏ inhibitory ထိန်းချုပ်မှု VTA ဤ DA afferents အားဖြင့်မအဖြစ် (Tseng & O'Donnell, 2007) ။ DA များ၏ပေါင်းစပ်အတွက်နှုန်း-ကန့်သတ်အင်ဇိုင်းများ၏အဆင့်ဆင့်, tyrosine hydroxylase, ထိုနည်းတူမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှတစ်ဆင့်နှင့် medial PFC နှင့်ကြွက်များ၏ NAc (မှာရှိတဲ့လူကြီးသို့တိုးမြှင့်Mathews et al ။ , 2009).
PFC မှ NAc သို့ချိတ်ဆက်မှုများသည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်ဆက်လက်တိုးပွားလာသည်။ ထို့အပြင် DAc D1 receptor များကိုဖော်ပြသောထို projection neuron များအချိုးအစားသည်ယာယီတိုးခြင်းနှင့်အတူ NAc သို့တင်ဆက်သည့် PFC pyramidal cells အရေအတွက်တိုးတက်မှုနှင့်အတူဆက်လက်မြင့်တက်နေသည်။ ) ။ ရလဒ်အနေဖြင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် (> ၄၀%) သည်ငယ်ရွယ်သော (သို့) သက်ကြီးရွယ်အိုအရွယ်များထက် <1-1%) ထက်မြင့်မားသောအဆင့်များ၌ D40-Rs အထွတ်အထိပ်များပါသည့်အချိုးကျစီမံထားသောပိရမစ်ဆဲလ်များ၏ရာခိုင်နှုန်းသည် (<4-5%) (Brenhouse et al ။ , 2008) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်မူးယစ်ဆေးရှာကြံ (ဥပမာအတွက် NAc မှ PFC ပရိုဂျက်၏အရေးပါမှုကိုအဘို့သက်သေသာဓကပေးထားသော, စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ကြသည် Kalivas et al ။ , 2005) နှင့် (ကိုတွေ့မြင်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အားဖြည့်ထိရောက်မှုတိုးမြှင့်အတွက် PFC D1-ရူပီးတစ်အလားအလာအခန်းကဏ္ဍများအတွက် Brenhouse et al ။ , 2008) ။ ဤအ PFC DA receptors ၏တံစဉ်များကို D1- အတွက်သိသိသာသာကျဆင်းမှုနှင့် P2 နှင့် P60 အကြားထင်ရှား D80-R ကိုသိပ်သည်းဆ (အတူအစောပိုင်းလူကြီးသည်အထိဖြစ်ပေါ်ပါဘူးAndersen က et al ။ , 2000).
1 /3အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကြားရှိ DA အဲဒီ receptor လူဦးရေရဲ့ - မတူဘဲ, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း dorsal striatum များ၌တွေ့မြင်မှတ်သား DA အတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာထိပ်အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆ 1 /2တစ်ဦးဆုံးရှုံးခြင်းအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဟာဆယ်ကျော်သက်အကူးအပြောင်း, စဉ်အတွင်းထိုအ receptors ၏သိသိသာသာတံစဉ်များကိုအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သည်ကို နှင့်လူငယ်လူကြီး, နှစ်ဦးစလုံးသည်လူ့သူသခှေဲစိတျခွငျးပစ္စည်းနှင့်တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ (ဥပမာကို အသုံးပြု. လေ့လာမှုများအတွက်ထင်ရှားဆုံးရှုံးမှု, Seeman et al ။ , 1987; Tarazi & Baldessarini, 2000; Teicher et al ။ , 2003) ။ နောက်ဆက်တွဲတံစဉ်များကိုအစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူငယ်လူကြီး (ဥပမာအကြား 1-2% သို့မဟုတ်ဒါ၏သိသာထင်ရှားသောကျဆင်းမှု၏အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူအတော်လေးကျိုးနွံရှိပုံရသည်ဖြစ်သော်လည်းအဆိုပါ NAc ထိုနည်းတူ, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအထွတ်အထိပ် D20- နှင့် D35-R ကိုအဆင့်ဆင့်ကိုပြသ Andersen က, 2002; Tarazi & Baldessarini, 2000😉သည်အခြားလေ့လာမှုများအတွက်သိသာထင်ရှားသောတံစဉ်များကိုတစ်ဦးမရှိခြင်း (ဥပမာတွေ့နှင့်အတူခြားနား Andersen က et al ။ , 2000).
DA သေံအတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပွောငျးလဲလည်း, ဤဆုလာဘ်-related ဒေသများတွင်အစီရင်ခံထားပါပြီ။ ဥပမာ, DA သေံအတွက်မြင့် ( "hyperdopaminergic" ပြည်နယ်) foskolin-သွေးဆောင်စခန်းစုဆောင်းခြင်းဒေတာအပေါ်အခြေခံပြီး NAc နှင့် dorsal striatum နှောင်းပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းရောက်ရှိနေပြီခံရဖို့ postulated (Andersen က, 2002) နှင့်ခန့်မှန်းလည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်နှုန်းထားများ (ကြည့်ရှု လှံ, 2000 ပြန်လည်သုံးသပ်များအတွက်) ကိုလည်းနှောင်းပိုင်းကမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဤဒေသများတွင်တွေ့မြင်ကြောင်း DA D1- နှင့် D2-R ကိုဆွ (DA ရဲ့သဘောထားအကြံပြုချက်များ "hyposensitivity") (တပ်တုန့်ပြန်၏ blunting) ကို (ဖြစ်ကောင်းအစားထိုးအတူသိသာစွာခြားနားAndersen က, 2002) ။ ထိုကဲ့သို့သောအစားထိုးတုံ့ပြန်မှုရှည်လျားဥပမာ (DA စနစ်များအတွင်းပြံ့နှံ့ဖြစ်လူသိများခဲ့ကြ, Zigmond et al ။ , 1990) နှင့်ပင်စနစ်များကိုဖြတ်ပြီး။ အဆုံးစွန်သောတစ်ခုဥပမာအားဖြင့်, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းတိုးလာ DA ဂီယာ၏အရိပ်လက္ခဏာတစ်ခု function hyposensitive DA စနစ်ရရှိလာတဲ့, သောသူတို့သည် striatum အတွက်ပရောဂျက်ဖို့ cholinergic အာရုံခံအတွက်အစားထိုးအပြောင်းအလဲများနှင့်အတူဆက်နွယ်ခဲ့ကြ (Bolanos et al ။ , 1998), မကြာခဏ DA agonists ဖို့တုံး psychomotor လှုံ့ဆော်တုံ့ပြန်မှု (ဥပမာနှင့်အတူ Bolanos et al ။ , 1998; Frantz et al ။ , 2007; Mathews et al ။ , 2009; လှံ & ဘရိတ်, 1983; Zombeck et al ။ , 2008) သော်လည်းမအမြဲ (Collins & Izenwasser, 2002; Niculescu et al ။ , 2005; Smith & Morrell, 2008ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်လူကြီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြသောအခါ) ကိုမွငျ။ (ထိုကဲ့သို့သော pretest ကိုင်တွယ်သို့မဟုတ်ကိုင်တွယ်ပမာဏကိုကဲ့သို့) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး variable တွေကို (လေ့လာမှုများကိုဖြတ်ပြီးသည်ဤကွဲပြားခြားနားသော psychopharmacological တွေ့ရှိချက်အထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါMaldonado & Kirstein, 2005a,b; mesocorticolimbic DA စနစ်များအပေါ်သူတို့၏လွှမ်းမိုးမှုမှတစ်ဆင့် Doremus-Fitzwater & Spear ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်သည်။ဘရိတ် et al ။ , 2004) နောက်ထပ်ရှုပ်ထွေးဖြည့်စွက်။
ဘယ်လိုဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပွောငျးလဲသည်ဤ DA စီမံကိန်းများတွင်ဆုချ-သက်ဆိုင်ရာမှ forebrain ဒေသများမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဆုလာဘ်-related အပြုအမူကိုသြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါ, မရှင်းလင်းသည်။ ဤပြောင်းလဲမှုများ DA စနစ်များတစ် hyposensitivity ရောင်ပြန်ဟပ်သင့်ပါတယ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူများမက်လုံးပေး salience သို့မဟုတ်စကားရပ်များ၏ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုအတွက်နှောင့်အယှက်ဖြစ်ပေါ် (ဥပမာတွေ့စေခြင်းငှါ, Berridge, 2007) ။ တနည်းအားဖြင့်မည်သည့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်ဆက်နွယ်သော DA hyposensitivity သည်သဘာဝသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်မည်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကိုမြှင့်တင်ပေးရန်၊ ဤဆုလာဘ်ချို့တဲ့မှုကို (လျော်ကြေးပေးခြင်းချို့တဲ့ခြင်းကိုကိုယ်စားပြုသည်ဟူသောစွဲလမ်းမှုသီအိုရီကဲ့သို့ပင်) Volkow et al ။ , 2007) ။ သို့သျောလညျး, စမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းပြောင်းလဲပစ်ကြောင်းဆုလာဘ်-ဆက်စပ်ဒေသများတွင်များစွာသောအခြားအလားအလာ "ကစားသမား" ရှိပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့်သူတို့ DA ပစ်မှတ်ဒေသများ (မှအာရုံကြောဆိုင်ရာသွင်းအားစုအဖြစ်အရေးကြီးသောအားပြိုင်မှုအစေခံဘယ်မှာ presynaptic နောက်ဆုံးတွင်မှဒေသခံစံနှုန်းသတ်မှတ်ထားသောဖြစ်ကြောင်း receptors (CB1-ရူပီး) နှင့်တကွ, ဥပမာအားဖြင့် cannabinoid system ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါCohen ကို et al ။ , 2008) ။ (ကြွက်များတွင် P1-30) မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း striatum နှင့် limbic ဒေသများတွင်ကြီးထွား CB40-ရူပီးအထွတ်အထိပ်, အရွယ်ရောက်ပြီးသူအဆင့်ဆင့်ရောက်ရှိဖို့သိသိသာသာကျဆင်းနေမတိုင်မီ (Rodriguez က de Fonseca et al ။ , 1993) ။ PFC အတွက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တစ်လျှောက်လုံးမြင်ကြ endocannabinoid အဆင့်ဆင့်အတွက်ထူးဆန်းသောဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအသွင်ပြောင်းလည်းဥပမာ, အတူမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း anandamide အတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာတိုးထင်ရှားသော်လည်း, 2-Arachidonoylglycerol (2-AG က) တွင်ငြင်းပယ် (Ellgren et al ။ , 2008) ။ နေ့စွဲဖို့အာရုံစိုက်တာမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် DA-related စနစ်များမြားတှငျပွောငျးလဲအပေါ်ခဲ့ပေမယ့်ထို့ကြောင့်ဤဆယ်ကျော်သက်-ပုံမှန်မှပြင်းထန်စွာအထောက်အကူပြုဖွယ်ရှိဖြစ်ကြောင်းကျယ်ကျယ်ဒါပေမယ့်စူးစမ်းခံရဖို့သေးရှိသည်သောဆုလာဘ်-related circuitry အခြားအသွင်ပြောင်းအတွင်း embedded နေကြတယ် လှုံ့ဆော်မှုဆုချီးတုံ့ပြန်။
IV ။ အလွဲသုံးစားမှုဖြင့်သဘာဝဆုလာဘ်များနှင့်ဆေးဝါးများဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလှုံ့ဆျောမှု
ဆုလာဘ်-related ဦးနှောက်ဒေသများတွင်အထက်တွင်ဆွေးနွေးတင်ပြဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကိုပြောင်းလဲပေးသည်, ကမြီးကောင်ပေါက်သူတို့လှုံ့ဆော်မှုဆုချီးတုံ့ပြန်သောနညျးလမျးမြားမှာသူတို့ရဲ့နုပျိုနှင့်အထက် counterparts တွေကိုကှာခွားကြောင်းအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာ, Conditions ရာအရပျ preference ကို (CPP က) ပါရာဒိုင်းကိုအသုံးပြုပြီးဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက်တွေ့ရှိချက်လူမှုရေးလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အသစ်အဆန်းအပါအဝင်အများအပြားမှာသဘာဝဆုလာဘ်, များအတွက်လှုံ့ဆျောမှုလူကြီးနှိုင်းယှဉ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းတိုးမြှင့်စေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ထိုအရပ်ကိုအေးစက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကွဲပြားတဲ့အခန်းထဲကအတူလှုံ့ဆော်မှု (ကမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ဥပမာအုပ်ချုပ်ရေး, တစ်ဝတ္ထုအရာဝတ္ထု, ဒါမှမဟုတ်လူမှုရေးမိတ်ဖက်များရှိနေခြင်း) ၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အားလုံးရှေ့မှောက်တွင်သီးခြားစမ်းသပ်မှုတွေအပေါ်အခြားကွဲပြားအခန်းထဲကအတူစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုမရှိခြင်းချိတ်တွဲနေစဉ်။ စမ်းသပ်မှုနေ့ရက်တွင်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သင်တန်းလှုံ့ဆော်မှုပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ခြင်းခြင်းမရှိဘဲ, နှစ်ဦးစလုံးအခန်းများမှတစ်ပြိုင်နက်သုံးစွဲနိုင်ခွင့်ပြုခဲ့ရသည်။ ယခင်ကသင်တန်းလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူတွဲဘက်ခြမ်းမှာသုံးစွဲအချိန်ပိုမိုတစ်ခုကြောင့်စီးပွားရေးနှိုးဆွဘို့အ preference ကို၏အညွှန်းကိန်း (ဆိုလိုသည်မှာယင်းစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုအကြိုးခဲ့သည်), အနှိုးဆွ (ဆိုလိုသည်မှာတစ်ခုခြင်းကိုမနှစ်သက်အညွှန်းထည့်နေပုံကိုသည့်အခြားရွေးချယ်စရာဘက်မှာသုံးစွဲအချိန်ပိုမိုနှင့်အတူတစ်ဦးသောအခြေအနေများအဖြစ်အသုံးပြုပါသည် ခြင်းကိုမနှစ်သက်နေရာ) ။ ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုသုံးပြီး, လူမှုရေးအရမွေးဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအထီးကြွက်ဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှုများအတွက် CPP ကပြမှပြသခဲ့ကြသည်, ၎င်းတို့၏အရွယ်ရောက်ပြီးသူ counterparts တွေကိုများတွင်ထင်ရှားမဟုတျကွောငျးအေးစက် (ဒေါက်ဂလပ် et al, 2003) ။ အလားတူပင်, လူမှုရေးချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏စကားရပ်တစ်ခုလိင်တူချင်း, လူမှုစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုအဖြစ်ကျွမ်းတဝင်မရှိသောမိတ်ဖက်, နှစ်ဦးစလုံးလူကြီးများ (ထက်ယေဘုယျပြပိုပြီးကြံ့ခိုင်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီအတွက်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမြီးကောင်ပေါက်သုံးပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းအတွင်းအကဲဖြတ်သောအခါဒေါက်ဂလပ် et al ။ , 2004) ။ လူမှုရေးလှုံ့ဆော်မှုပင်လူမှုရေးအဆက်အသွယ်၏ကြိုတင်ဆင်းရဲချို့တဲ့ခြင်းမရှိဘဲနေဆဲမြီးကောင်ပေါက်မှကြိုးခဲ့ကြသည်ပေမယ့်လူမှုရေး interaction ကဤအကြိုးဂုဏ်သတ္တိများ (ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ကြိုတင်လူမှုရေးဆင်းရဲချို့တဲ့သဖြင့်တိုးမြှင့်ခဲ့သည်ဒေါက်ဂလပ် et al ။ , 2004) ။ အတော်လေးဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်များ၏ရေတိုရေရှည်လူမှုရေးဆင်းရဲချို့တဲ့ (အိုင်ဆိုလိတ်အိမ်ယာ၏ 5-7 ရက်) ထိုနည်းတူ (တိုက်ပွဲအထူးသဖြင့်ကစား၏စည်းကမ်းချက်များ၌, လူမှုရေးအပြုအမူတိုးမြှင့်ဖို့အစီရင်ခံထားသည်Holloway & Suter, 2004; Panksepp, 1981; Takahashi & Lore, 1983; Varlinskaya et al ။ , 1999အထူးသဖြင့်အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်မှတ်သားကြသည်), အကျိုးသက်ရောက်မှုများ (Varlinskaya & လှံ, 2008).
သဘာဝကလှုံ့ဆော်မှုများအကြိုးသက်ရောက်မှုအလားတူမူးယစ်ဆေးဝါးလှုံ့ဆော်မှုများ၏အကြိုးဂုဏ်သတ္တိများလည်းမြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူကြီးများအကြားကွဲပြားလိမ့်မည်။ ဤအ ontogenetic လေ့လာမှုအတော်များများယနေ့အထိတွေ့ရှိချက်ယေဘုယျအားဖြင့်အရွယ်ရောက်မှဆွေမျိုးမြီးကောင်ပေါက်အကြားဒီဆေးတွေများအတွက်ပိုကောင်း preference ကိုဖေါ်ပြခြင်းနှင့်အတူ, အထူးသဖြင့်ကိုကင်း, နီကိုတင်းနှင့်ရိုးရာစိတ်ကြွဆေးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကြပါပြီ။ ၎င်းတို့၏အရွယ်ရောက်ပြီးသူ counterparts တွေကိုဤအခြေအနေများအောက်တွင် CPP ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့ပျက်ကွက်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ခွဲခန်းကနေလေ့လာမှုမှာတော့ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက် (နီကိုတင်း၏အတော်လေးနိမ့်ထိုး (0.6 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်) မှသိသိသာသာနီကိုတင်း-သွေးဆောင် CPP ကပြမှတွေ့ရှိခဲ့သည်Vastola et al ။ , 2002) ။ မြီးကောင်ပေါက်ဥပမာ (အဖြစ်ကောင်းစွာနဲ့အခြားလေ့လာမှုများအတွက်လူကြီးများထက်ပိုမိုအားကောင်းနီကိုတင်း-သွေးဆောင် CPP ကပြအစီရင်ခံခဲ့ကြ, Shram et al ။ , 2006; တောရက်စ် et al ။ , 2008).
ကိုကင်းဖို့ CPP ကပိုမိုစကားရပ်ထိုနည်းတူလူကြီးများမှဆွေမျိုးမြီးကောင်ပေါက်အကြားသတင်းပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဆယ်ကျော်သက်အထီးကြွက်အရွယ်ရောက်အမျိုးသားများ (လုပ်ခဲ့တယ်ထက်ကိုကင်းများ၏အနိမ့်ဆေးများမှာ CPP ကပြသBadanich et al ။ , 2006; Brenhouse & Andersen, 2008; Brenhouse et al ။ , 2008; Zakharova et al ။ , 2008a), ကိုကင်းချင်းတိုးတက်ရေးပါတီမှ sensitivity ကို၌ဤအသက်အရွယ်ကွာခြားချက်တို့နှင့်လည်း Zakharova et al (အမျိုးသမီးများအတွက်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ , 2008b) ။ ကိုကင်း-သွေးဆောင် CPP ကမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းအနိမ့်ဆေးများမှာသာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့, ဒါပေမယ့်လည်းပိုပြီးတဖြည်းဖြည်းငြိမ်းအေးနှင့်လူကြီးများ (နှိုင်းယှဉ်မြီးကောင်ပေါက်အကြား reinstatement အဘို့ သာ. ကြီးမြတ် propensity ပြသရန်ပြသခဲ့သည်Brenhouse & Andersen, 2008) ။ မြီးကောင်ပေါက်အကြားကိုကင်းဖို့မြှင့်တင်ရန်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏အစီရင်ခံစာများအချို့လေ့လာမှုများအသက်အရွယ်-related ကွဲပြားခြားနားမှု (စောငျ့ရှောကျဖို့ပျက်ကွက်နှင့်အတူသို့သော်နေရာအနှံ့မဟုတ်Aberg et al ။ , 2007; ကမ့်ဘဲလ် et al ။ , 2000).
အီသနော၏အကြိုးဂုဏ်သတ္တိများ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုတွေ့မြင် (ယုံကြည်စိတ်ချရသောအီသနော-သွေးဆောင် CPP ကသရုပ်ပြဆန့်ကျင်ဘက်အတွက်ကြွက်နှင့်အတူကြောင့်ကြွက်များတွင်အီသနောအဘို့အ CPP ကတည်ထောင်အတွက်အခက်အခဲများ၏အစိတ်အပိုင်းအတွက်စိန်ခေါ်မှုထင်ရှားပြကြပြီ အစိမ်းရောင် & ဂရေဟမ်, 2008 ကိုးကားခြင်းနှင့်သုံးသပ်ချက်) သည်။ အီသနော CPP ကအီသနောရန်ကြိုတင်ထိတွေ့အောက်ပါတိရိစ္ဆာန်များအစီရင်ခံထားကြောင်းနှင့်အတူကြွက်, သို့သော်, ပုံမှန်အားဖြင့် (ကြည့်မြင်အီသနော-သွေးဆောင် conditional ရာအရပျခြင်းကိုမနှစ်သက် (တကြ် CPA) ကိုပြသ Fidler et al ။ , 2004 ကိုးကားဘို့) ။ အီသနော-ရင်တော့မှားမယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင် (အစား CPP ကထက်) အီသနော-သွေးဆောင်တကြ် CPA ၏မကြာခဏပေါ်ပေါက်လာ (အီသနောဒဆန္ဒရှိ postabsorptive သက်ရောက်မှုမှအရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်၏တိုးမြှင် sensitivity ကိုနှင့်ဆက်စပ်သောခံရဖို့ဖွယ်ရှိသည်Fidler et al ။ , 2004) ။ အီသနောဆုလာဘ်၏အကဲဖြတ်ဘို့ကတခြားနည်းဗျူဟာများအသုံးပြုခြင်း, သို့သော်, မကြာသေးမီအစီရင်ခံစာများ၏စုံတွဲတစ်တွဲဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်များထက်ပိုလူကြီးများထက်အားဖြည့်ခံရဖို့အီသနောကိုရှာဖွေစေခြင်းငှါအချို့ကနဦးသက်သေအထောက်အထားပေးပါပြီ။ ဒုတိယယူမှုကိုအေးစက်ဆန်းစစ်အလုပ်များတွင်စမ်းသပ် (တွဲ) ကြွက် unpaired ထိန်းချုပ်မှုတိရိစ္ဆာန်များအတွက် sucrose ထိတွေ့ခဲ့ကြသော်လည်း, အဆင့် 1 စဉ်အတွင်း sucrose ၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ပါးစပ်တာဟာ (CS1) နဲ့တွဲ (အခြွင်းချက်မရှိလှုံ့ဆော်မှု [အမေရိကန်]) အီသနော၏ intragastric တာဟာလက်ခံရရှိ CS1 မတိုင်မီအီသနောကိုအမေရိကန် (များ၏အုပ်ချုပ်ရေးမှလေးနာရီPautassi et al ။ , 2008) ။ ဒုတိယအေးစက်အဆင့်မှာတော့နှစ်ဦးစလုံးတွဲများနှင့် unpaired အုပ်စုများအတွက်တိရိစ္ဆာန်များကိုတစ်ဦး discrete ပတ်ဝန်းကျင် (CS1) အတွက် sucrose CS2 ထိတွေ့ခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှုမှာဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်ထို့နောက် CS3 ပတ်ဝန်းကျင်ပါရှိသောကြောင့်တစ်ဦး 2-အခန်းထဲကယန္တရားစူးစမ်းဖို့အခွင့်အလမ်းပေးခဲ့သောအခါ, တွဲအခြေအနေမြီးကောင်ပေါက်အဆိုပါ CS2 အားဖြည့်အပြုသဘောမှီခဲ့ကွောငျးအကြံပြုခြင်း, သူတို့ရဲ့ unpaired ထိန်းချုပ်မှုထက် CS2 အဘို့ သာ. ကြီးမြတ် preference ကိုပြသ ယင်းအီသနောကိုအမေရိကန်အတူ CS1-mediated အသင်းအဖွဲ့မှတဆင့်ဂုဏ်သတ္တိများ။ ထိုသို့သောဒုတိယအလို့ငှာအေးစက်လူကြီးများစမ်းသပ်မှာ CS1 preference ကိုဆန်းစစ်တဲ့အခါမှာအဆင့် 1 unpaired လူကြီးများအနေဖြင့်မတူညီသောမဟုတ်ထဲမှာ CS2 / အမေရိကန်တွဲထိတွေ့မှုလက်ခံရရှိအတူအရွယ်ရောက်သူများတွင်ထင်ရှားမဟုတ်ခဲ့ပေ။
အရွယ်ရောက်မကြာသေးမီကအီသနော-သွေးဆောင် tachycardia ၏အကဲဖြတ်မှတဆင့်ရယူခဲ့ပါတယ်ထက်မြီးကောင်ပေါက်အကြားအီသနောပိုမိုအကြိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်အပိုဆောင်းသက်သေအထောက်အထားများ, အပြုသဘော ventral striatum အတွက် DA လွှတ်ပေးရန်ဆက်နွယ်နေကြောင်းခံရဖို့ပြသထားတဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းတာမှု (Boileau et al ။ , 2003) နှင့်အီသနောရဲ့အကြိုးသက်ရောက်မှု၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္အတိုင်းအတာနှင့်အတူလူ့လေ့လာမှုများအတွက် (Conrod et al ။ , 1998; Holdstock & က de ကျေး, 2001; Holdstock et al ။ , 2000). Ristuccia & လှံ (2008) အညွှန်းကိန်းမှအသုံးအီသနော-သွေးဆောင် tachycardia အီသနောဒ hedonic တန်ဖိုးကိုနှစ်ဦးစလုံးဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးကြွက်တစ် 2-နာရီန့်အသတ်-access ကို, ပါးစပ် Self-အုပ်ချုပ်ရေး session တစ်ခုအတွင်းမှာ။ ဤအခြေအနေများအောက်တွင်, ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်မသာလူကြီးများထက် ပို. အီသနောကိုလောင်, အီသနောစားသုံးမှုအတွက်အသက်အရွယ်ကွာခြားချက်ထပ်တလဲလဲ (ရှုလေ့လာခဲ့Brunell & လှံ, 2005; Doremus et al ။ , 2005; Vetter et al ။ , 2007အဆိုပါ saccharin ထိန်းချုပ်မှုဖြေရှင်းချက်-တစ်အရွယ်ရောက်သူတို့တွင်လေ့လာတွေ့ရှိမဟုတ်ခြားနားချက်မှဆွေမျိုးသည့်အီသနောကိုသောက်သုံးကြသောအခါ), ဒါပေမဲ့သူတို့မှာလည်းနှလုံးခုန်နှုန်းအတွက်သိသိသာသာ သာ. ကွီးမွတျတိုးပြသခဲ့သည်။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအီသနောရန် tachycardic တုံ့ပြန်မှုက၎င်း၏အကြိုး / အပြုသဘော hedonic သက်ရောက်မှု၏ခိုင်လုံသောအညွှန်းကိန်းကိုကိုယ်စားပြုသောအတိုင်းအတာအထိအဲဒီရလဒ်တွေကိုမြီးကောင်ပေါက်ဆန္ဒအလျောက်ယင်း၏အကျိုးအကြိုးခံစားခှငျ့ရရှိအီသနော၏လုံလောက်သောပမာဏစားသုံးရန်လူကြီးများထက်ပိုများပါတယ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
မကြာသေးမှီကလူနဲ့တိရစ္ဆာန်အလေ့လာမှုများအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အကြိုးတန်ဖိုးကိုဒီအပြန်အလှန်လူကြီးထက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ပိုမိုသိသာဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ, လူမှုရေးအခြေအနေတွင်လွှမ်းမိုးမှုခံရစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းသောက်သုံးအပေါ်လူမှုရေးအခြေအနေတွင်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကို (အထူးသဖြင့်အရေးကြီးသောအဖြစ်ရှုမြင်နေသည်Read et al ။ , 2005(ပြင်းပြင်းထန်ထန်သောက်သုံးဘို့လူမှုရေးစိတ်ရင်းထောက်ခံသူကိုမြီးကောင်ပေါက်အကြား), အရက်သောက်နှုန်းနှင့်အတူအမြင့်မားဆုံးMohr et al ။ , 2005) ။ လူမှုရေးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုများအတွက်အဓိကအန္တရာယ်အချက် (ဖြစ်ခြင်းရွယ်တူများနှင့်မိတ်ဆွေမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုအများဆုံးကြံ့ခိုင်ခန့်မှန်းကြားတွင်ရှိပါတယ်Epstein et al ။ , 2007; Skara & Sussman, 2003) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းမြင့်မားသောမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုများအတွက် propensity နှင့်လူမှုရေးအခြေအနေတွင်၏အထူးဆီလျော်မှု, စိတျအပိုငျးရှိဇီဝဖြစ်နိုင်သည်။ သူတို့ရဲ့လူ့ counterparts တွေကိုများ၏ဆင်တူ, ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက် (အရွယ်ရောက်သူထက်အီသနော၏လူမှုရေးသင်တန်းနည်းပြသက်ရောက်မှုမှအထူးပိုပြီးအထိခိုက်မခံများမှာVarlinskaya & လှံ, 2002) ။ ထို့ပြင်တစ်လူမှုရေးအခြေအနေတွင်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှု (ကိုကင်းများ၏အကြိုးတန်ဖိုးကိုမြှင့်တင်ရန်ပြသထားသည်သီရဲလ် et al ။ , 2008) နှင့်နီကိုတင်း (သီရဲလ် et al ။ , 2009) ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်မအသက်အရွယ်နှိုင်းယှဉ်သည်ဤလေ့လာမှုများလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပေမယ့်, အ CPP ကပါရာဒိုင်းအတွက်စမ်းသပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ။ ဒီစနစ်လူမှုရေးအပြုအမူနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကဆယ်ကျော်သက်တိရိစ္ဆာန်များတွင်တွေ့မြင်နီကိုတင်းနှင့်ကိုကင်းဆုလာဘ်ဒီလူမှုရေးတိုးမြှင့်, လူမှုရေးလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် endogenous mu opioid စနစ်၏ activation နှင့်ဆက်စပ်သောစေခြင်းငှါ (ဗန် Ree et al ။ , 2000; Gianoulakis, 2004).
လူကြီးများမှဆွေမျိုးမြီးကောင်ပေါက်တွင်တွေ့မြင်အလွဲသုံးစားမှုဖြင့်သဘာဝဆုလာဘ်များနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အကြိုးဂုဏ်သတ္တိများဖို့မကြာခဏတိုးမြှင် sensitivity ကို, (ပင်အချို့သောသဘာဝကဆုလာဘ်မှဖြစ်ကောင်းနှင့်) ကိုဆန္ဒရှိမူးယစ်ဆေးဝါးအကျိုးဆက်တွေကို၎င်းတို့၏ sensitivity ကိုမှမတူဘဲ attenuated ခံရဖို့ပုံရသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, တူညီတဲ့စမ်းသပ်စီးရီးအတွင်းသီးခြားလေ့လာမှုများ, လူကြီးများမှဆွေမျိုး, ဆယ်ကျော်သက်နီကိုတင်း-သွေးဆောင်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီမှနှစ်ဦးစလုံး သာ. ကြီးမြတ် sensitivity ကိုပြသပေမယ့်နီကိုတင်းဖို့ဖြစ်စေအေးစက်အရသာဆန္ဒရှိ (CTA) ကနေတဆင့်ရည်ညွှန်းတဲ့အခါမှာနီကိုတင်းဖို့အားနည်းခြင်းကိုမနှစ်သက်တုံ့ပြန်မှု (တွေ့ရှိခဲ့Shram et al, 2006) သို့မဟုတ်မြင့်မားသောနီကိုတင်းပမာဏမှ conditional ရာအရပျဆန္ဒရှိမှတဆင့် (တောရက်စ် et al ။ , 2008) ။ မြီးကောင်ပေါက်တိုးမြှင့်အပြုသဘောဆောင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုမသာပြသပေမယ့်လည်းအဖြစ်ကောင်းစွာအခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူဆန္ဒရှိအကျိုးဆက်များ attenuated လိမ့်မည်။ မကြာသေးခင်ကကျနော်တို့ (ကတွဲ CS ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုသိသာထင်ရှားသောအီသနော-သွေးဆောင် CTA တည်ထောင်ရန်နိုင်ရန်အတွက်လူကြီးများထက်အများကြီးပိုမိုမြင့်မားဆေးများလိုအပ်မြီးကောင်ပေါက်နှင့်အတူ, အီသနောဒဆန္ဒရှိအကျိုးဆက်များအကဲဖြတ်ရန် CTA လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုအသုံးပြုခဲ့ကြAnderson က et al ။ , 2008a, b; Varlinskaya et al ။ , 2006) ။ ထို့အပွငျ Infurna & လှံ (၁၉၇၉) အစောပိုင်းကဆွေးနွေးတင်ပြမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း psychomotor စိတ်ကြွဆေးများအတွက်မကြာခဏဖော်ပြခဲ့သည်တိုးမြှင်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီနှင့်အတူခြားနားထားတဲ့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် CTA inducing အတွက်စိတ်ကြွဆေးတစ်ခု attenuation ထိရောက်မှု, (ဥပမာပြသ Badanich et al ။ , 2006; Brenhouse & Andersen, 2008; Brenhouse et al ။ , 2008; Zakharova et al ။ , 2009a , b) ။ အဆိုပါလူမှုရေးအခြေအနေတွင်ဆယ်ကျော်သက်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်မြှင့်တင်ရန်, ဒါပေမယ့်လည်းအီသနောထိတွေ့မှု၏ဆန္ဒရှိအကျိုးဆက်များ attenuate ဖြစ်နိုင်သည်သာ။ CTA, ဆယ်ကျော်သက်ပေမယ့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူမဟုတ်အထီးကြွက် (လေ့လာထားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုအားဖြင့်ရည်ညွှန်းအဖြစ်ဥပမာ, မူးယစ်နေစဉ်အတွင်းတစ်လူမှုရေးအခြေအနေတွင်ထိတွေ့အီသနောဒဆန္ဒရှိသက်ရောက်မှုမှ sensitivity ကိုလျော့နည်းစေVetter-O'Hagen et al ။ , 2009).
ဆန္ဒရှိမူးယစ်ဆေးအကျိုးဆက်များဤဆယ်ကျော်သက်-ဆက်စပ်အာရုံမခံစားနိုင်သော၏အတိအကျကိုအာရုံကြောဆိုင်ရာယန္တရားများနေဆဲအမည်မသိသော်လည်းဆုလာဘ်-related neurocircuitry အတွင်းတည်ရှိသော dynorphyn / Kappa opioid အဲဒီ receptor စနစ်များကိုကင်းနှင့်အအီသနောအပါအဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များမှ sensitivity ကိုပါဝင်ပတ်သက်စေခြင်းငှါအချို့သက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ် (Chefer et al ။ , 2005; Zapata & Shippenberg, 2006) ။ ဒီ endogenous opioid စနစ်၏လုပ်ဆောင်မှုအတွက်တိုး (ကိုတွေ့မြင်အားဖြင့်ဒီဆေးတွေ၏အပြုသဘောဆောင်သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများလျော့ကျလာသို့မဟုတ်ပင် dysphoria ထုတ်လုပ်ဖြစ်စေ, ထို mesolimbic DA စနစ်၏ cocaine- သို့မဟုတ်အီသနော-သွေးဆောင် activation ဆန့်ကျင် Shippenberg et al ။ , 2007) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏မကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်အီသနော၏လူမှုရေး anxiogenic ဆိုးကျိုးများသာ (ဖို့အတော်လေးအာရုံမခံစားနိုင်သောဖြစ်ကြောင်းပြသကြVarlinskaya & လှံ, 2002), ဒါပေမယ့်လည်းရွေးချယ် Kappa agonist, U60,622E ၏, နှစ်ဦးစလုံးမူးယစ်ဆေးဝါးများလူမှုရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလျော့ကျလာခြင်းနှင့်လူမှုရေးရှောင်ရှားခြင်း (သို့လူမှုရေး preference ကိုပြောင်းလဲနှင့်အတူVarlinskaya & လှံ, 2009) ။ အလုပ်အရက်၏ဆိုးကျိုးအကျိုးဆက်တွေကိုမှဆယ်ကျော်သက်အာရုံမခံစားနိုင်သောဖို့နောက်ထပ် Kappa opioid စနစ် ontogenetic ကွဲပြားခြားနားမှုများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလေ့လာစူးစမ်းဖို့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဖြစ်ပါတယ်။
အတူတူ, ဒီသဘာဝတရား၏လေ့လာမှုများ (မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်လူမှုရေးအခြေအနေတွင်နှင့်အတူမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုတိုးမြှင့်, သဘာဝဆုလာဘ်များအတွက်အဖြစ်မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်များအတွက်ထူးခြားသောစိတ်ခွန်အားနိုး sensitivity ကိုတစ်ဦး ontogenetic ကာလဖြစ်မည်အကြောင်းတိုးမြှင့်သက်သေအထောက်အထားပေးTheil et al ။ , 2008, 2009), နှင့်၎င်းတို့၏ဆန္ဒရှိဂုဏ်သတ္တိများ attenuating (Vetter-O'Hagen et al ။ , 2009) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဆန္ဒရှိမူးယစ်ဆေးဝါးအကျိုးဆက်တွေကိုတစ်ဦးဆွေမျိုးခုခံနှင့်အတူပေါင်းစပ်မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်တစ်ခုတိုးလာ sensitivity ကို, မှုတစ်ခုလျော့နည်းသွား sensitivity ကိုမှသာယာသောမူးယစ်ဆေးအတွေ့အကြုံများ initial ကြောင့်ဆက်လက်အသုံးပြုမှုများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေ, ဒါပေမယ့်လည်းနောက်ဆက်တွဲအသုံးပြုမှုများ၏ပြင်းအားသာတိုးမြှင့်နိုင် ကြောင်းအသုံးပြုမှုဆန္ဒရှိအစိတ်အပိုင်းများကို။
ယေဘုယျအားကြိုးများနှင့်အဓိပ္ပာယ်ပြည့်လှုံ့ဆော်မှုများ၏ဆန္ဒရှိဂုဏ်သတ္တိများထုတ်ဖော်အသုံးဝင်သော်လည်း, CPP ကထိုကဲ့သို့သောအကျိုးသက်ရောက်စေထည့်သွင်းတွက်ချက်မှု, ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူများနှင့်သင်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်များ (အဖြစ်ဆုလာဘ်များစွာအစိတ်အပိုင်းများ, ရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့စောဒကတက်ထားသည်Berridge & ရော်ဘင်ဆင်, 2003) ။ ထို့ကြောင့် CPP ကတွေ့ရှိချက်များတွင်အသက်အရွယ်ကွဲပြားခြားနားမှုဆုလာဘ်-related ဖြစ်စဉ်များတစ်ဦးပေါင်းစပ်မဆိုထင်ဟပ်နိုင်ဘူး။ ဒါကွောငျ့ကြှနျတျောတို့အလုပ်အတွက်ကျွန်တော်ပိုကောင်းမြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူကြီးများအကြားစိတ်ခွန်အားနိုးကွဲပြားမှုလက္ခဏာမှ ontogeny ဖြတ်ပြီးဆုလာဘ်ဖြစ်စဉ်များပိုမို discrete ရှုထောင့်ကိုအာရုံစိုက်ဖို့စတင်ပါပြီ။ တစ်ခုမှာထိုကဲ့သို့သောမဟာဗျူဟာသဘာဝကျကျကြိုးလှုံ့ဆော်မှုများ၏အကျိုးသက်ရောက်စေသည့်ယူဆရ hedonic အတွက် ontogenetic ကွဲပြားခြားနားမှုအကဲဖြတ်အာရုံစိုက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် (ယူဆ, သင်တန်း, ထို hedonic Non-လူ့နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေမျိုးစိတ်အတွက်ခိုင်လုံသော Construction ကိုယ်စားပြုထိခိုက်စေ) ။ ဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက်လေ့လာမှုများအတွက် hedonic ပြည်နယ်အညွှန်းထည့်နေပုံကိုများအတွက်ရိုးရာနည်းလမ်းများအနက် sucrose စားသုံးမှုစာမေးပွဲတစ်အရေးပါတယ်လို့ဖြေရှင်းချက်၏စားသုံးမှုကြွက်များတွင် anhedonic ပြည်နယ်များအမျိုးမျိုးအောက်မှာ attenuated ကြောင်းပေးထားသည် (ဥပမာ Papp & Moryl, 1996; Willner et al ။ , 1987) ။ ဒီနည်းလမ်းကိုဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်အကြား sucrose စားသုံးမှုအတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှအသက်အရွယ်ကွဲပြားခြားနားမှုဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်တဲ့အခါ, မြီးကောင်ပေါက်၎င်းတို့၏အရွယ်ရောက်ပြီးသူ counterparts တွေကိုတစ် ml / ကီလိုဂရမ်အခြေခံဆွေမျိုး (အပေါ် သာ. ကြီးမြတ် sucrose စားသုံးမှုပြမှတွေ့ရှိခဲ့သည်Wilmouth & လှံ, 2009).
အရသာ reactivity ကို၏အကဲဖြတ်မှာလည်းမြင့်မားမျိုးစိတ်ကိုဖြတ်ပြီးထိန်းသိမ်းထားသည်ဤတုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူ, အညွှန်းကိန်းမှအရသာလှုံ့ဆော်မှုများ၏ hedonic ဂုဏ်သတ္တိများ (သို့မဟုတ် "အကြိုက်") ကိုအသုံးပြုထားပြီး (ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည်မြင်သောကြောင့် Berridge, 2007; ကင် & Berridge 1985) ။ ဆန္ဒရှိအရသာထိုကဲ့သို့သော gaping တုံ့ပြန်မှု (ကဲ့သို့သောအခြားတုံ့ပြန်မှုထုတ်ယူသော်လည်းဥပမာ, စည်းချက်သို့မဟုတ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လျှာကို protrusions တစ်အရေးပါတယ်လို့အရသာ (အပြုသဘောတုံ့ပြန်မှု) ၏ဖြန့်ဝေဖို့တုန့်ပြန်ပြနေကြသည်Berridge & Treit, 1986; ကင် & Norgren, 1978) ။ အရေးပါတယ်လို့ဖြေရှင်းချက်ပေးဖို့အပြုသဘောတုံ့ပြန်မှုများ၏အရေအတွက်နှင့်ပြင်းထန်မှုကို (အပြုသဘော hedonic ဂုဏ်သတ္တိများစမ်းသပ်မှုဘာသာရပ်အားဖြင့်ဖြေရှင်းချက်မှစွပ်စွဲအညွှန်းကိန်းမှအကြံပြုထားသည်ကင် & Berridge, 1985) ။ sucrose နှင့် intraoral cannulae မှတဆင့်ကယ်နှုတ်ကတခြားဖြေရှင်းချက်အမျိုးမျိုးပြင်းအားမှဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများအကြားအရသာ reactivity ကိုဆန်းစစ်စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုစီးရီးမှာတော့ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်တသမတ်တည်း (အရွယ်ရောက်သူထက် သာ. ကြီးမြတ်အပြုသဘောအရသာတုံ့ပြန်မှု (ဥပမာပိုပြီးစည်းချက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လျှာကို protrusions) ပြမှပြသပြီWilmouth & လှံ, 2009) ။ မြီးကောင်ပေါက်အကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်အရသာ reactivity ကိုနှင့် sucrose စားသုံးမှုအတွက်ထိုကဲ့သို့သောတိုးအစောပိုင်းကဖော်ပြထားတဲ့ CPP က, ဒုတိယယူမှုကိုအေးစက်နှင့် tachycardia လေ့လာမှုများ၌ထင်ရှားသည့်သဘာဝ, မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်ဆုလာဘ်အဘို့ သာ. လှုံ့ဆျောမှု၏ဆင်တူဖြစ်ကြသည်။ အပြုသဘော hedonic ဤယူဆအစီအမံကို အသုံးပြု. မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းမြင်ပြီတိုးမြှင့်သက်ရောက်မှုကိုထိခိုက်မှာလည်းလူကြီးများထက်မြီးကောင်ပေါက်အတွက်ဆုလာဘ်လက်ခံရရှိစဉ်အတွင်း NAc ပိုမိုစုဆောင်းအကြံပြုခြင်းလူ့ပုံရိပ်လေ့လာမှုများ (ဥပမာ, Ernst et al ၏ evocative ဖြစ်ကြသည် 2005 ။ သွပ်ရည်စိမ် et al ။ , 2006), ဖြစ်သော်လည်းဤအတွေ့ရှိချက်ဥပမာ (နေရာအနှံ့မဟုတ် Bjork et al ။ , 2004).
အရသာ reactivity ကိုပါရာဒိုင်းအတွက် sucrose ဖြေရှင်းချက်ပိုမိုအပြုသဘောတုံ့ပြန်မှုဖေါ်ပြခြင်းအပြင်, ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်လည်းထိုကဲ့သို့သောကွီနိုင်အဖြစ်ဆန္ဒရှိဖြေရှင်းချက်မှလူကြီးများမှဆွေမျိုးလျှော့ချအနုတ်လက္ခဏာအရသာတုံ့ပြန်မှု, (ပြတွေ့ရှိပြီWilmouth & လှံ, 2009), အမြှင့်တင်ရန်ကြိုး၏ဆင်တူတွေ့ရှိချက်တစ်ခုပုံစံပေမယ့်ယခင်ကဖော်ပြထားမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဆန္ဒရှိဂုဏ်သတ္တိများ attenuated ။ အတန်ငယ်အလားတူတွေ့ရှိချက် dorsolateral prefrontal cortex နှောင်းပိုင်းကမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အားဖြင့်အပြုသဘောတုံ့ပြန်ချက်ထက်အပျက်သဘောအားဖြင့် သာ. ကြီးမြတ်စုဆောင်းမှုတစ်ခုတဖြည်းဖြည်း switch သည်နှင့်တကွ, အကျူး / အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်ကာလအတွင်းအနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်ချက်ထက်အပြုသဘောပိုမိုစုဆောင်းပြသနိုင်ဖို့အစီရင်ခံထားပါတယ်ဘယ်မှာမကြာသေးမီပုံရိပ်အလုပ်အတွက်ထွန်းသစ်စနေကြတယ် / အစောပိုင်းလူကြီး (ဗန် Duijvenvoorde et al ။ , 2008). Crone နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (2008) ထိုနည်းတူအဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ကာလအတွင်းတိုကျရိုကျဦးနှောက်ဒေသများအမျိုးမျိုးဖြတ်ပြီးအနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်ချက်မှ activation အတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ-ပုံမှန်တိုး၏နှောင့်နှေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏သက်သေအထောက်အထားများရှိသည်။
တစ်ဦးအညွှန်းကိန်းအဖြစ် 50 kHz ultrasonic အသံ (USVs) ၏ထုတ်လွှတ်မှုတွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ sucrose စားသုံးမှုနှင့်အရသာ reactivity ကိုလေ့လာမှုများ၏ရလဒ်များကိုမှမတူဘဲ, သို့သော်, တစ်ကြိုးလူမှုရေးစီးပွားရေးနှိုးဆွဖို့ hedonic တုံ့ပြန်မှုအတွက်ဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦး-related ကို attenuation အချို့သက်သေအထောက်အထားများလေ့လာတွေ့ရှိထားသည် အပြုသဘော (အကျိုးသက်ရောက်စေBlanchard ဖြစ်ပြီး et al ။ , 1993; Fu & Brudzynksi, 1994) ။ ယခင်သုတေသနများတွင်ကြွက်များ (ကြည့်ရှုခြင်းကိုမနှစ်သက်အခြေအနေအမျိုးမျိုးအောက်မှာ 22 kHz ၏အကွာအဝေးအတွင်း USVs ထုတ်လွှတ်ပြသပြီ Brudzynski, 2001), ခြေလျင်ထိတ်လန့်အပါအဝင် (Tonoue et al ။ , 1986) နှင့်အသားစားအနံ့၏ရှေ့မှောက်တွင် (Blanchard ဖြစ်ပြီး et al ။ , 1991) ။ အဆိုပါ 50-55 kHz အကွာအဝေးအတွင်း USVs ၏ expression, သို့သော်, (တိုက်ပွဲထိုကဲ့သို့သောကစားအဖြစ်တစ်ဦးအပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်စေပြည်နယ် inducing ခွအေနမြေားနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်Knutson et al ။ , 1998), စမ်းသပ် "ကလိခြင်း" (Panksepp & Burgdorf, 2000), နှင့်အကျိုးကိုလမ်းကြောင်း၏လျှပ်စစ်ဆွ (Burgdorf et al ။ , 2000) ။ ဤအ 50 kHz USVs တစ်ခု age- နှင့်လိင်-လိုက်ဖက် conspecific နှင့်အတူလူမှုရေးအပြန်အလှန်တစ်ဦး 10-မိကာလအတွင်းအကဲဖြတ်ခဲ့မြီးကောင်ပေါက်ပင်မြီးကောင်ပေါက်သော်လည်း, ဒီ "သူတွေရဲ့စားသောက်" ကာလအတွင်းလူကြီးများထက်သိသိသာသာနည်းပါးလာအပြုသဘောဖုန်းခေါ်ဆိုမှုထုတ်လုပ်ရန်တွေ့ရှိခဲ့သည်၏တဲ့အခါမှာထုတ်လုပ်မှု အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေထက်စမ်းသပ်ကာလအတွင်းသိသိသာသာပိုပြီးလူမှုရေးအပြုအမူအတွက်စေ့စပ် (Willey et al ။ , 2009) ။ ဤရလဒ်သည်မြင့်မားစွာပုံတူပွားဖြစ်ကြောင်းနှင့်လူမှုရေးဆင်းရဲချို့တဲ့အပြုသဘောလူမှုရေးအပြုအမူ၏ကြိမ်နှုန်းနှင့် 50 kHz USVs (နှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူဆက်နွယ်နေကြောင်းကြောင်းပေးထား, 50 kHz USVs ၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့်လူမှုရေးအပြုအမူ၏စကားရပ်များအကြားတစ်ဦးယှဉ်ပြိုင်မှုကြောင့်မဟုတ်Knutson et al ။ , 1998; Willey et al ။ , 2007) ။ လူမှုရေး interaction က၏ hedonic တန်ဖိုးကိုတစ်ယူဆအညွှန်းကိန်း - ထို့ကြောင့်ဤ USV စမ်းသပ်ချက်၏ရလဒ်များကိုလူမှုရေးအပြုအမူနှင့်အခြေအနေတွင်ထုတ်လွှတ် 50 kHz USVs အကြားတစ်ဦးဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ dissociation အကြံပြုအပ်ပါသည်။
အဆိုပါ, 50 kHz USVs ထိခိုက်စေအပြုသဘောရောင်ပြန်ဟပ်သောပွဲတစ်ပွဲယူဆချက်အသုံးပြုခြင်း Willey et al ။ (2009) ဒေတာ hedonic ပျော်မွေ့၏တပ်မက်လိုချင်သောအငွေပမာဏအောင်မြင်ရန်အလို့ငှာ (ဆိုလိုသည်မှာလူမှုရေး interaction ကတိုးပွားလာ) ဖြစ်ကောင်းဒီသဘာဝကဆုလာဘ်များ "စားသုံးမှု" ၌တစ်ဦးအစားထိုးတိုးဖို့မြီးကောင်ပေါက်ဦးဆောင်လျော့ချအပြုသဘောလူကြီးဖို့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဆွေမျိုးစဉ်အတွင်းလူမှုရေးလှုံ့ဆော်မှုမှထိခိုက်စေဘို့သက်သေသာဓကသည်။ သို့သျောလညျး, အပြန်အလှန်အထက်တွင်ဆွေးနွေး sucrose စားသုံးမှုနှင့်အရသာ reactivity ကိုဒေတာမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအရေးပါတယ်လို့ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုတိုးလာအပြုသဘော hedonic သက်ရောက်မှု၏ထောက်ခံမှုအတွက်သက်သေအထောက်အထားများကိုပေးစွမ်းသည်ဤအတူဖြစ်ကောင်းဒီဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအကူးအပြောင်းကာလအတွင်းယင်း၏ပျြောမှေ့စရှုထောင့်အဘို့တိုးမြှင့်ဆုလာဘ်စားသုံးမှု precipitating hedonic အပျော်အပါးတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ယနေ့အထိဒေတာမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုသဘာဝကြိုးလှုံ့ဆော်မှုမှတိုးမြှင့်သို့မဟုတ် attenuated hedonic တုံ့ပြန်မှုတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်, မအဖြစ်ကောင်းစွာမူးယစ်ဆေး-related ဆုလာဘ်ထိခိုက်မခံတဲ့အတွက်အသက်-related ပွောငျးလဲခွငျးနှငျ့ ပတျသကျ. ဟောကိန်းများကိုရှင်းလင်းဖို့ရှိမရှိအဖြစ်ရိုးရှင်းနိဂုံးချုပ်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြကြပါဘူး။ ရှင်းနေသည်မှာ ပို. သုတေသနဖြစ်ကောင်းအထူးလိုအပ်ကြောင်းပြည်နယ်ဆီသို့ညွှန်ကြားအာရုံစူးစိုက်မှုအဖြစ်နည်းလမ်းနှင့်ဆုလာဘ်၏ဆွေမျိုးပြင်းထန်မှုနှင့်အတူဤကိစ္စများဖြေရှင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။ အမှန်စင်စစ် fMRI တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါလူ့မြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူကြီးများအတွက်ဆုလာဘ်မှ NAc activation နှိုင်းယှဉ်ဖို့, သွပ်ရည်စိမ်နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (2006) လူကြီးများထက်ပိုကြီးတဲ့ဆုလာဘ်နှင့်အတူ NAc စုဆောင်းမှုအတွက်ပိုပြီးသိသိသာသာတိုးဖေါ်ပြခြင်းမြီးကောင်ပေါက်နှင့်အတူပုံမှန်အားဖြင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းချဲ့ကားပြောဆိုမှုများခံရဖို့အရွယ်ရောက်သူ၌ထင်ရှား NAc activation နှင့်ဆုလာဘ်ပြင်းအားအကြားဆက်ဆံရေး, ရှာတွေ့ပေမယ့်သေးငယ်တဲ့ဆုလာဘ်တုံ့ပြန်အားနည်းစုဆောင်းမှုပြသရန်ထိန်း။ အတူတူ, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏အခြေခံတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များကို အသုံးပြု. ထပ်မံလေ့လာမှုများနှင့်အတူပေါင်းစပ်လူ့မြီးကောင်ပေါက်များ၏ဆုလာဘ် sensitivity ကို၏ fMRI လေ့လာမှုများ, အလားအလာကြိုးလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်လူကြီးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဆုလာဘ်-ညွှန်ကြားအပြုအမူတွေအပေါ်၎င်းတို့၏သက်ရောက်မှုများအပေါ်သက်ရောက်မှုအရေးပါမှုအဖြစ်အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များသည်ဖြစ်နိုင်သည်။
ဆယ်ကျော်သက်များ၏ထူးခြားသောဆုလာဘ်များအပေါ်တုန့်ပြန်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့်အခြားသဲလွန်စများကိုဆယ်ကျော်သက်များကဆုလာဘ်များကမည်သို့လှုံ့ဆော်သည်ကိုအာရုံစိုက်ခြင်းမှရရှိနိုင်ပါသည်။ ရလိုဗင်း၏အဓိကအယူအဆ (သို့) လိုချင်ခြင်းဟူသောအယူအဆကိုရော်ဘင်ဆင်နှင့်ဘာရစ်ဂျင်တို့ကလူကြိုက်များခဲ့သည်။ရော်ဘင်ဆင် & Berridge, 2003, 1993, 2008), သက်ဆိုင်ရာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှုဆီသို့ဦးတည်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူကိုရည်ညွှန်း "လို" နဲ့။ သက်ရှိရှင်သန်မှုသေချာစေရန်, ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာနှင့်ရေအတိုင်း, ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အကြိုးလှုံ့ဆော်မှုအသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်ရှာတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုလိုအပ်ပါတယ်။ ဒီအယူအဆအရ, မက်လုံးပေး salience ၏ဖြစ်စဉ်ကိုသဘာဝကဆုလာဘ်များနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူဆက်နွယ်တွေကိုမှစိတ်ခွန်အားနိုးတနျဖိုး attributing အတွက်တာဝန်ရှိသည် (ရော်ဘင်ဆင် et al ။ , 1998) ။ အရေးကြီးတာက, ကအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများပြန်လည်သုံးသပ်မြင်ဘို့ကသဘာဝဆုလာဘ်ရယူ၏ရည်ရွယ်ချက်အရပျ၌မူလကရာမက်လုံးပေး salience ၏ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုတာဝန်ရှိသည် Hi-jacking အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်များ, (နိုင်စွမ်းဖြစ်ကြောင်းတွေးဆထားသည် ရော်ဘင်ဆင် & Berridge, 2003, 1993, 2008) ။ အထူးသမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူတဲ့အခါမှာထပ်ခါတလဲလဲတွေ့ဆုံ (ဆုလာဘ်-related ဦးနှောက် circuitry အတွက်အာရုံကြောကိုပြောင်းလဲနေတဆင့်) အပြုအမူဆိုင်ရာ sensitive ကမူးယစ်ဆေးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-ဆက်စပ်တွေကိုအဘို့အမက်လုံးပေး salience ၏ာင်းသွေးဆောင်လည်း (ဖြစ်ရပ်ဆန်းချေါ "မက်လုံးပေးာင်း"-တစ်ဦးပေါ်ပေါက်ဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်ရော်ဘင်ဆင် & Berridge, 1993, 2008).
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းများတွင်အလုပ် (Doremus-Fitzwater & Spear, 2008) (နိမိတ်လက္ခဏာကို-ခြေရာခံခြင်းအပြုအမူ၏အကဲဖြတ်သုံးပြီးသဘာဝကဆုလာဘ်များအတွက်မက်လုံးပေး salience အတွက်အလားအလာရှိသောအသက်ကွဲပြားခြားနားမှုစူးစမ်းဖို့စတင်နေပြီFlagel et al ။ , 2007, 2008, 2009) ။ တစ်ဦးအစာစားချင်စိတ်ဆုလာဘ်နှင့်အတူဆက်နွယ်နေတဲ့ cue အဆိုပါ cue သူ့ဟာသူဆီသို့ဦးတည်ချဉ်းကပ်မှုနှင့်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူ elicits တဲ့အခါမှာ Sign-ခြေရာခံခြင်း (အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအလွန်အကျွံဖြစ်လာနိုငျသော cue-ညွှန်ကြားအပြုအမူဖြစ်ပေါ်Tomie, 1995) ။ Flagel နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုတွေ့မြင်ပြန်လည်သုံးသပ် (ထိုကဲ့သို့သောတွေကိုမှချဉ်းကပ်မှုနှင့်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူ၏စကားရပ် (ထက်ခါနီးဆုလာဘ်ပေးပို့၏ Spatial တည်နေရာ) ကို cue များအတွက်မြှင့်တင်ရန်မက်လုံးပေး salience ၏ညွှန်ပြကြောင်းတွေးဆခဲ့ကြ Flagel et al ။ , 2009).
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းမှာသဘာဝနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်ပိုမိုစားသုံးမှုဆုလာဘ်-related တွေကိုများအတွက်ပိုကောင်းမက်လုံးပေး salience နှင့်ဆက်နွယ်သောအတိုင်းအတာအထိ, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရောက်မှ သာ. ကြီးမြတ်သည်နိမိတ်လက္ခဏာကို-ခြေရာခံအပြုအမူဆွေမျိုးပြလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရတော့မှာပါ။ ဒီအယူအဆဆနျးစစျဖို့ကနဦးအလုပ်အတွက်, (အသက်အရွယ်အုပ်စုတစ်စုနှုန်း 12 တိရိစ္ဆာန်များနှင့်အတူ) ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးကြွက်တစ်ဦးငှက်ပျောတောင့်များ၏တုံ့ပြန်မှု-လွတ်လပ်သောပေးပို့ရှေ့အကာ illuminated ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်လီဗာတစ်ခု 8-စက္ကတင်ဆက်မှုနှင့်အတူတစ်ဦး autoshaping အခွအေနသို့ထားရှိခဲ့ကြသည်။ ကြွက် 25 ရက်ပေါင်းစုစုပေါင်းအဘို့, နေ့တိုင်း5လီဗာ-တောင့်ကွန်မြူနစ်ဝါဒပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါလီဗာအခနျး ( "ရည်မှန်းချက်-ခြေရာခံ") သို့ထည့်သွင်းသောအခါကအခြားကြွက်အစားအစာကျင်းချဉ်းကပ်ခြင်းနှင့်ထဲသို့ဝင်သော်လည်းအချိန်ကျော်အချို့ကြွက်၎င်း၏တင်ပြချက် ( "sign-ခြေရာခံ") အပေါ်သို့လီဗာ CS ချဉ်းကပ်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာပင်သော်လည်းအဆက်အသွယ် အဆိုပါလီဗာမဟုတ်သလိုအစားအစာဆုလာဘ်အစာအဟာရကျင်းထိခိုက်ပေးပို့မဟုတ်အတူ။ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအသက်အရွယ်အုပ်စုများနှစ်ဦးစလုံးသည်နိမိတ်လက္ခဏာကို-ခြေရာခံခြင်း၏သက်သေအထောက်အထားများပြသကြောင်းအချို့တိရိစ္ဆာန်များပါရှိသောပေမယ့်မြီးကောင်ပေါက်ခြုံငုံသိသိသာသာအားနည်းသောနိမိတျလက်ခဏာ-ခြေရာခံဟာသူတို့ရဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူများထက်ပြသ (ကြည့်ရှု သဖန်းသီး။ 1) ။ နိမိတ်လက္ခဏာကို-ခြေရာခံခြင်းအပြုအမူ၌ဤဆယ်ကျော်သက်-ဆက်စပ်လျှော့ချရေး (အမျိုးသမီးကြွက်လည်းထင်ရှား၏Doremus-Fitzwater & Spear, 2008; Doremus-Fitzwater & Spear (ပြန်လည်ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်) နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်ထပ်မံလုပ်ဆောင်မှုများအားဖြင့်လည်းအတည်ပြုခဲ့သည် (Anderson & လှံ, 2009) ။ နိမိတ်လက္ခဏာကို-ခြေရာခံလူကြီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာဆယ်ကျော်သက်တိရိစ္ဆာန်များအကြား၌ဤကို attenuation အံ့သြစရာများနှင့်ကျွန်တော်တွေးဆခဲ့ရာမှဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအစားအစားအစာဆုလာဘ်ခန့်မှန်းတဲ့ discrete cue များအတွက်မက်လုံးပေး salience ရင့်ကျက်မှာထက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းအနိမ့်စေခြင်းငှါအကြံပြုချက်ထောက်ခံပါတယ်။ ခြေရာခံခြင်းမက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုများ၏ခိုင်လုံသောအညွှန်းကိန်းကိုကိုယ်စားပြုတယ်နှင့်အခြားဆုလာဘ်ခန့်မှန်းတွေကိုမှ generalizes အတိုင်းအတာပုပ္ပနိမိတ်, တွေ့ရှိချက်မြီးကောင်ပေါက်မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်များအတွက် cue-သွေးဆောင်တဏှာဖို့ပိုအားနည်းချက်မကျမည်အကြောင်းအကြံပြုဘတ်နိုင်။ တန်ပြန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မူရင်းအယူအဆမှပေမယ့်အဲဒီဒေတာအကျိုးကိုထားချက်အရလက်ခံရရှိဆုချမှအလားတူတုံ့ပြန်စဉ်, ဒေတာမြီးကောင်ပေါက်ရွေးချယ်လျှော့ချပြသ "အဲဒီအကြံပြုဘတ်သည့်အခါလူကြီးများထက် NAc ၏လျော့နည်းစုဆောင်းမှုပြမှဆယ်ကျော်သက်ဖေါ်ပြခြင်းလူ့ fMRI အလုပ်ကနေတွေ့ရှိချက်များဆင်တူများမှာ ဆုလာဘ်-ညွှန်ကြားအပြုအမူများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးသော်လည်းမသူတွေရဲ့စားသောက်အစိတ်အပိုင်းများကို "(၏စုဆောင်းမှုBjork et al ။ , 2004, p.1793) ။
ဆယ်ကျော်သက် (အနက်ရောင်စက်ဝိုင်း) နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ (အဖြူရောင်စက်ဝိုင်း) အထီးကြွက်တစ်ဦး illuminated လီဗာ (ထိုအေးစက်နှိုးဆွ) ၏တစ်ဦး 8-စက္ကတင်ဆက်မှုတစ်ခုငှက်ပျောတောင့်များ၏တုံ့ပြန်မှု-လွတ်လပ်သောပေးပို့နေဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည့်အတွက်တစ်ဦး autoshaping လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်ထိတွေ့ခဲ့သည်။ ...
ဒါဟာအရွယ်ရောက်မှဆွေမျိုးမြီးကောင်ပေါက်တွင်တွေ့မြင်ခြေရာခံဟာသိသိသာသာ attenuation နိမိတ်လက္ခဏာကိုနှိုးဆွရွေးချယ်ရေးအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအသက်အရွယ်ကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့် cue သင်ယူမှုလိုလားသောဆက်ဆံရေးအတွက်ရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်ကြောင်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်တစ်ဦး passive ရှောင်ရှားခြင်းလုပ်ငန်းတာဝန်များတွင်တစ်ဦးအဟောင်းတွေလေ့လာမှု (ပိုမိုနုပျိုသို့မဟုတ်အထက်ကြွက်များထက် Contextual ပြောင်းလဲမှုအားဖြင့်နှောင့်အယှက်အနေဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်များလျော့နည်းတစ်မလိုအပ်တဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှု cue အတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုအားဖြင့်နှောင့်အယှက်ခဲ့ကြသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့Barrett et al ။ , 1984) ။ မကြာသေးမီအလုပ်များတွင်မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှု၏လျော့နည်း cue-သွေးဆောင် reinstatement လူကြီးများ (အဖြစ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအစပျိုးကြောင်းတိရစ္ဆာန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုကင်းသို့မဟုတ်မော်ဖင်းအကိုက်ဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားကြွက်များတွင်တွေ့မြင်ခဲ့သည်ဒိုဟာဆီ et al, 2009, လီ & Frantz, 2009မြီးကောင်ပေါက်ဖြစ်ကောင်းကွဲပြားခြားနားလူကြီးများလုပ်ပေးထက်လှုံ့ဆော်မှုဖို့စိတ်ခွန်အားနိုး salience attribute စေခြင်းငှါအကြံပြုချက်နှင့်အတူလည်းမရှိပါ), ဒေတာ။ ရှင်းနေသည်မှာ ပို. သုတေသနမြီးကောင်ပေါက်ဆုလာဘ်နှင့်သူတို့အားဆုလာဘ်ခန့်မှန်းတွေကိုအဘို့အမက်လုံးပေး salience သူတို့ရဲ့ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုများတွင်လူကြီးများအနေဖြင့်ကွာခြားမည်သို့ကိစ္စကိုဖြေရှင်းရန်အဖြစ်ဖို့ဆယ်ကျော်သက်-ဆက်စပ် propensity ဤဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုများ၏အလားအလာသက်ရောက်မှုတွေဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ် သုံးပါများနှင့်တခါတရံတွင်မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်အလွဲသုံးစား။
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဦးနှောက်နှင့်အပြုအမူများတွင်ထူးခြားသောအသွင်ပြောင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာသောဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ မျိုးစိတ်အမျိုးမျိုးဖြတ်ပြီးမြီးကောင်ပေါက်အပြုအမူတွေကိုရှာကြံအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေနှင့်အသစ်အဆန်းအတွက်ရှိုးတိုးသာ, ဒါပေမယ့်လည်းသူတို့ရဲ့ရွယ်တူချင်းအတူမြင့်မားသောလူမှုရေး interaction ကဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ တိုင်းဒေသကြီးများတွင်ဦးနှောက်ကိုပြောင်းလဲစိတ်ခွန်အားနိုးနှင့်ဆုလာဘ်-related အပြုအမူတွေဖွယ်ရှိသည်ဤဆယ်ကျော်သက်-ပုံမှန်အပြုအမူ၏စကားရပ်အထောက်အကူပြုဖြန်ဖြေအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရ။ ဖြစ်ကောင်း NAc တစ်ခုတိုးပွားတုန့်ပြန်နှင့်ဆက်စပ်အစောပိုင်းဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းသို့မဟုတ်ပုံကြီးချဲ့ဆုလာဘ်စနစ်,, ဒီဖွံ့ဖြိုးရေးအဆင့်ကာလအတွင်းအလားအလာဆုလာဘ်များ၏အပြုသဘောဆောင် hedonics တစ်ခုတိုးမြှင် sensitivity ကိုဦးတည်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ အပိုဆောင်းအပြုအမူသက်သေအထောက်အထားထိုကဲ့သို့သောဆန္ဒရှိဂုဏ်သတ္တိများအခြေခံသည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာယန္တရားများစနစ်တကျမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်စူးစမ်းကြပြီမဟုတ်ပေမယ့်မြီးကောင်ပေါက်အပြန်အလှန်, ဖြစ်ကောင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတွင်ဤအတူတူစိတ်ခွန်အားနိုးစနစ်များအာရုံကြောအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပွောငျးလဲမှတဆင့်လှုံ့ဆော်မှုများ၏ဆန္ဒရှိဂုဏ်သတ္တိများတစ်ခု attenuation sensitivity ကိုပြစေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။ နောက်ဆုံးတွင်တိုးမြှင့်အပြုသဘော၏ဤဆယ်ကျော်သက်-ပုံမှန်ပေါင်းစပ် / မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အခြားလှုံ့ဆော်မှုဆီသို့ဆန္ဒရှိဘက်လိုက်မှုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းမြင့်မားသောမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါ attenuated ။ တစ်ဝတ္ထုမူးယစ်ဆေးဝါး၏ပထမဦးဆုံးသုံးစွဲခြင်းတို့အပေါ်မှာ, မြီးကောင်ပေါက်ကဒီကနဦးအသုံးပြုမှုကိုထပ်ခါတလဲလဲမည်ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးမြှင့်, မှတ်သားလောက်ဆန္ဒရှိဆိုးကျိုးများ (ဥပမာပျို့အလင်းခေါင်းနှစ်လုံး) ၏မရှိခြင်းအတွက်အပြုသဘောဆောင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုများတွေ့ကြုံခံစားစေနိုင်သည်။ ဆက်လက်သုံးစွဲခြင်းနှင့်အတူ sensitivity ကိုဤပုံစံများအတော်လေးမြင့်မားသောအသုံးပြုမှုအဆင့်ဆင့်နှင့်အားနည်းချက်ရှိသူများအကြားအသုံးပြုမှုကြမ်းတမ်းပုံစံများပေါ်ပေါက်ရေးခွင့်ပြုသည်။ မြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူကြီးများအကြားဦးနှောက် circuitry အတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုပေးပုံစံများအလွဲသုံးစားတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောလမ်းကြောင်းကိုမူးယစ်ဆေး "တဏှာ" (ဥပမာ၏ာင်းမှဦးဆောင်ဖြစ်ကောင်းထပ်ခါတလဲလဲသုံးစွဲခြင်းနှင့်အတူလူကြီးများအတွက်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်စေခြင်းငှါ, ရော်ဘင်ဆင် & Berridge, 2003) သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ကယ်ဆယ်ရေးများအတွက် prompt ကိုဆက်လက်သုံးစွဲခြင်း (ဥပမာ, ကိုမြင်သော Post-အသုံးပြုမှုဆန္ဒရှိအကျိုးဆက်များတိုးပွားရန် Koob, 2001) ။ ပိုကောင်းတဲ့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအန္တရာယ်များနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သည့်အပြုအမူတွေကိုနားလည်နိုင်ရန်အတွက်ပိုမိုသုတေသနမြီးကောင်ပေါက်အကြားဆုလာဘ်-related အပြောင်းအလဲနဲ့သွင်ပြင်လက္ခဏာများအဖြစ်ကဤလုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ်ဆက်နွယ်ဆုလာဘ်-သက်ဆိုင်ရာ neurocircuitry အတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပွောငျးလဲများ၏သက်ရောက်မှုဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။
Aberg M က, Wade: D, အမှတ်တရ, E, MDMA ၏ Izenwasser အက်စ် Effect (ecstasy) လှုပ်ရှားမှုနဲ့ကိုကင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင်အခွအေနေအရပျကိုဦးစားပေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်ပေါ်မှာ။ Neurotoxicology နှင့် Teratology ။ 2007;29: 37-46 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Adriani W က, Chiarotti က F, Laviola G. အဓာတ်လှေကားအသစ်အဆန်းရှာခြင်းနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ periadolescent ကြွက်များတွင်ပိုင်ထိုက်သောဃ-စိတ်ကြွဆေးာင်း။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 1998;112: 1152-66 ။ [PubMed]
Adriani W က, periadolescent ကြွက်များတွင်အတင်းအကျပ်အသစ်အဆန်းများနှင့် D-စိတ်ကြွဆေးနှစ်ဦးစလုံးမှ Laviola G. အတစ်မူထူးခြားတဲ့ဟော်မုန်းများနှင့်အမူအကျင့် hyporesponsivity ။ Neuropharmacology ။ 2000;39: 334-46 ။ [PubMed]
Andersen က SL ။ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတစဉ်အတွင်းဒုတိယ messenger ကိုသိသိ amp အတွက်အပြောင်းအလဲများအာရုံကိုလိုငွေပြမှု / hyperactivity ရောဂါ (ADHD) အတွက်မော်တော်လက္ခဏာတွေအခြေခံစခွေငျးငှါ အမူအကျင့်ဦးနှောက်သုတေသန။ 2002;130: 197-201 ။ [PubMed]
Andersen က SL, Thompson က AT, Rutstein M က, Hostetter JC, Teicher MH ။ ကြွက်များတွင် periadolescent ကာလအတွင်း prefrontal cortex အတွက် Dopamine အဲဒီ receptor တံစဉ်များကို။ synapses ။ 2000;37: 167-9 ။ [PubMed]
Anderson က RI က, လှံ LP ။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်များနှင့်အီသနောစားသုံးမှု-ခြေရာခံခြင်း Sign: တစ်ခု autoshaping လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမှဆယ်ကျော်သက် Pre-ထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ အာရုံကြောသိပ္ပံများအတွက် Society ၏နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးတွင်တင်ပြပိုစတာ; ချီကာဂို, IL ။ အောက်တိုဘာ, 2009 ။
Anderson က RI က, Varlinskaya EI, လှံ LP ။ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းစိတ်ဖိစီးမှု, sucrose စားသုံးမှုနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးကြွက်များတွင်အီသနော-သွေးဆောင် conditional အရသာခြင်းကိုမနှစ်သက်။ အရက်အပေါ်သုတေသန Society ၏နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးတွင်တင်ပြပိုစတာ; ဝါရှင်တန်ဒီစီ။ ဇွန်, 2008a ။
Anderson က RI က, Varlinskaya EI, လှံ LP ။ အထီးကျန်စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးကြွက်များတွင်အီသနော-သွေးဆောင် conditional အရသာခြင်းကိုမနှစ်သက်။ Developmental Psychobiology များအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Society ၏နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးတွင်တင်ပြပိုစတာ; ဝါရှင်တန်ဒီစီ။ နိုဝင်ဘာ, 2008b ။
Arnett ဂျေ Sensation ရှာကြံ: အသစ်တစ်ခုကိုစိတ်ကူးအသစ်တစ်ခုစကေး။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်တစ်ဦးချင်းကွာခြားချက်များ။ 1994;16: 289-96 ။
Badanich Ka, Adler KJ, Kirstein CL ။ မြီးကောင်ပေါက်နျူကလီးယပ်အတွက် preference ကိုနှင့်ကိုကင်း-သွေးဆောင် dopamine septi accumbens ကင်းသောအခြေအနေများအရပျ၌လူကြီးများအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနား။ ဆေးဝါးဗေဒ၏ဥရောပဂျာနယ်။ 2006;550: 95-106 ။ [PubMed]
Barrett BA, Rizzo T က, လှံ NE, လှံ LP ။ ကှာသောသူ, periadolescent နှင့်ငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်: passive ရှောင်ရှားခြင်းသင်ယူမှုနှင့်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းအတွက်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုရွေးချယ်ရေး။ အမူအကျင့်များနှင့်ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောဇီဝဗေဒ။ 1984;42: 23-32 ။ [PubMed]
Baxter MG, Murray EA ၏။ အဆိုပါ amygdala နှင့်ဆုလာဘ်။ သဘာဝတရားပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ။ neuroscience ။ 2002;3: 563-73 ။
Belluzzi JD, Lee က AG က, Oliff HS, Leslie FM ရေ။ locomotor လှုပ်ရှားမှုနဲ့ကြွက်အခြေအနေများအရပျကို preference ကိုပေါ်နီကိုတင်း၏အသက်အရွယ်-မှီခိုသက်ရောက်မှု။ Psychopharmacology ။ 2004;174: 389-95 ။ [PubMed]
ဂိ FM ရေ, တေလာ JB, Cunningham MC ။ psychopathology ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်သက်ရောက်မှုတွေ: အ postnatal ကာလအတွင်း medial prefrontal cortex အတွက် monoaminergic စနစ်များ convergence နှင့် plasticity ။ ဦးနှောက် Cortex ။ 2000;10: 1014-27 ။ [PubMed]
Berridge KC ။ အမူအကျင့်မှ neuroscience အတွက်လှုံ့ဆျောမှုသဘောတရားများ။ ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 2004;81: 179-209 ။ [PubMed]
Berridge KC ။ ဆုလာဘ်အတွက် dopamine ရဲ့အခန်းကဏ္ဍအပေါ်မှာဆွေးနွေးငြင်းခုံ: မက်လုံးပေး salience များအတွက်အမှု။ Psychopharmacology (Berl) 2007;191: 391-431 ။ [PubMed]
Berridge KC, Kringelbach ML ။ အပျော်အပါး၏အကျိုးသက်ရောက်စေ neuroscience: လူသားများနှင့်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်ဆုလာဘ်။ Psychopharmacology (Berl) 2008;199: 457-80 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Berridge KC, ရော်ဘင်ဆင် TE ။ ဆုလာဘ် parsing ။ အာရုံကြောသိပ္ပံအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း။ 2003;26: 507-13 ။
Berridge KC, Treit ဃ Chlordiazepoxide တိုက်ရိုက်ကြွက်များတွင်အပြုသဘောဆောင်စားသုံးမိတုံ့ပြန်မှုပိုကောင်းစေပါတယ်။ ဆေးဝါးဗေဒ, ဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 1986;24: 217-21 ။
Bjork JM, Knutson B, Fong သည် GW, Caggiano DM, Bennett က SM, Hommer DW ။ မြီးကောင်ပေါက်ထဲမှာမက်လုံးပေး-ရူးနှမ်းဦးနှောက်လုပ်ဆောင်ချက်: တူညီနှင့်လူငယ်လူကြီးများအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားမှု။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2004;24: 1793-802 ။ [PubMed]
Blanchard ဖြစ်ပြီး RJ, Blanchard ဖြစ်ပြီး, DC, Agullana R ကို, Weiss သည် SM ။ နှစ်ဆယ်နှစ် kHz နှိုးဆော်သံမြင်နိုင် Burrow စနစ်များနေထိုင်ဓာတ်ခွဲခန်းကြွက်များအားဖြင့်တစ်ဦးအသားစား၏တင်ဆက်မှုမှအော်ဟစ်။ ဇီဝကမ္မဗေဒ & အပြုအမူ။ 1991;50: 967-972 ။ [PubMed]
Blanchard ဖြစ်ပြီး RJ, Yudko ​​eb, Blanchard ဖြစ်ပြီး, DC, Taukulis ဟောင်ကောင်။ high-ကြိမ်နှုန်း (35-70 kHz) ထုံဆေး conspecifics နှင့်အတူရင်ဆိုင်ကြွက်များတွင် ultrasonic အသံ: gepirone ၏ဆိုးကျိုးများ, အီသနောနှင့် diazepam ။ ဆေးဝါးဗေဒ, ဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 1993;44: 313-19 ။
Boileau ငါ Assaad JM, Pihl ro, Benkelfat ကို C, Leyton M က, Diksic M က, Tremblay RE, Dagher အေအရက်သောက်လူ့နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်အားပေးအားမြှောက်။ synapses ။ 2003;49: 226-231 ။ [PubMed]
Bolanos, CA, periadolescent ကြွက်များတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးများ dopaminergic မှ Glatt SJ, ဂျက်ဆင်ဃ Subsensitivity: တစ်အပြုအမူနှင့် neurochemical ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ဦးနှောက်သုတေသန။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဦးနှောက်သုတေသန။ 1998;111: 25-33 ။ [PubMed]
ဘရိတ် WG ကို, Zhang က ty, Diorio J ကို, Meaney MJ, mesocorticolimbic dopamine နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင် psychostimulants နှင့်ဖိအားအပြုအမူတုံ့ပြန်မှုအပေါ်အစောပိုင်း postnatal မွေးမြူအခြေအနေများ၏ Gratton အေသြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဥရောပဂျာနယ်။ 2004;19: 1863-74 ။ [PubMed]
Brenhouse HC, Andersen က SL ။ လူကြီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ, မျိုးသုဉ်းခြင်းနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်များတွင်ကင်းသောအခြေအနေများအရပျကို preference ကို၏အားကောင်း reinstatement နှောင့်နှေး။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2008;122: 460-5 ။ [PubMed]
Brenhouse HC, Sonntag KC, Andersen က SL ။ prefrontal cortex projection အာရုံခံအပေါ်ယာယီ D1 dopamine အဲဒီ receptor စကားရပ်: မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မူးယစ်ဆေးဝါးတွေကိုတိုးမြှင့်စိတ်ခွန်အားနိုး salience မှဆက်ဆံရေးမျိုး။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2008;28: 2375-82 ။ [PubMed]
ဘရောင်းကို BB ။ ရွယ်တူချင်းအတူမြီးကောင်ပေါက် '' ဆက်ဆံရေး။ ခုနှစ်တွင်: Lerner RM, Steinberg ld, အယ်ဒီတာများ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်စိတ်ပညာ၏လက်စွဲစာအုပ်။2။ Hoboken: Wiley; 2004 ။ စစ။ 363-94 ။
Brudzynski သည် SM ။ ကြွက်များတွင် 22 kHz နှိုးဆော်သံဖုန်းခေါ်ဆိုမှု၏ Pharmacological နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာသွင်ပြင်လက္ခဏာများ။ neuroscience နှင့် Biobehavioral ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ။ 2001;25: 611-617 ။ [PubMed]
Brunell SC, လှံ LP ။ pair တစုံ-သျောဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်ဒူအီသနောဖြေရှင်းချက်များ၏ဆန္ဒအလျောက်စားသုံးမှုအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ လက်တွေ့နှင့်စမ်းသပ်သုတေသနရက်။ 2005;29: 1641-53 ။
Burgdorf J ကို, Knutson B ကို, ကြိုးလျှပ်စစ်ဦးနှောက်ဆွ၏ Panksepp ဂျေရှိလာကြွက်များတွင် ultrasonic အသံ evokes ။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2000;114: 320-7 ။ [PubMed]
ကမ့်ဘဲလ် Jo, Wood က RD, လှံ LP ။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်ကင်းနှင့်မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင်ရာအရပျအေးစက်။ Physioloy နှင့်အပြုအမူ။ 2000;68: 487-93 ။
Cao J ကို, Lotfipour S က, Loughlin SE, Leslie FM ရေ။ ကိုကင်း-အထိခိုက်မခံအာရုံကြောယန္တရားများ၏ဆယ်ကျော်သက်ကလေးရငျ့။ Neuropsychopharmacology ။ 2007;32: 2279-89 ။ [PubMed]
Cardinal RN, ပါကင်ဂျာခန်းမ J ကို, Everitt BJ ။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှု: အပု amygdala ၏အခန်းကဏ္ဍ, ventral striatum နှင့် prefrontal cortex ။ neuroscience နှင့် Biobehavioral ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ။ 2002;26: 321-52 ။ [PubMed]
Caster JM, Walker က QD, Kuhn CM ။ ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်များတွင်ထပ်ခါတလဲလဲ-ထိုးကင်းဖို့ Enhanced အပြုအမူတုံ့ပြန်မှု။ Psychopharmacology (Berl) 2005;183: 218-25 ။ [PubMed]
Caster JM, Walker က QD, Kuhn CM ။ ကိုကင်းတဲ့တစ်ခုတည်းသောအမြင့်ဆုံးထိုးမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုဖြတ်ပြီးသီးခြားအပြုအမူတွေကိုလုပ်ဖို့ differential ကိုာင်းဖြစ်ပေါ်သည်။ Psychopharmacology ။ 2007;193: 247-60 ။ [PubMed]
Chefer VI ကို, Czyzyk T က, Bolan EA ၏, Moron J ကို, Pintar je, Shippenberg TS ။ Endogenous Kappa-opioid အဲဒီ receptor စနစ်များကိုကင်းဖို့ mesoaccumbal dopamine ဒိုင်းနမစ်နှင့်အားနည်းချက်ထိန်းညှိ။ အာရုံကြောသိပ္ပံများ၏ဂျာနယ်။ 2005;25(20): 5029-5037 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Cohen ကို M က, Solowig N ကို, Carr က V. ဆေးခြောက်, cannabinoids နှင့် schizophrenia: အသက်သေအထောက်အထား၏ Intergation ။ သြစတြေးလျနှင့်စိတ်ရောဂါကုသမှု၏နယူးဇီလန်။ 2008;42: 357-68 ။
Collins SL, Izenwasser အက်စ်ကင်း differential အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်နှိုင်းယှဉ် periadolescent အတွက်အပြုအမူနှင့် neurochemistry ပွောငျးလဲ။ ဦးနှောက်သုတေသန။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဦးနှောက်သုတေသန။ 2002;138: 27-34 ။ [PubMed]
Collins SL, Izenwasser အက်စ်နာတာရှည်နီကိုတင်း differential ဆယ်ကျော်သက် vs. အရွယ်ရောက်ပြီးသူသည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်များတွင်ကင်း-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှုပွောငျးလဲ။ Neuropharmacology ။ 2004;46: 349-62 ။ [PubMed]
Conrod PJ, Pihl ro, ကွဲပြားရက် Subtype များအတွက်အန္တရာယ်မှာယောက်ျား၏အုပ်စုများအတွက်အရက်အားဖြည့်ဖို့ Vassileva ဂျေ Differential sensitivity ကို။ လက်တွေ့နှင့်စမ်းသပ်သုတေသနရက်။ 1998;22: 585-97 ။
Crone EA ၏, Zanolie K ကိုဗန် Leijenhorst L ကို, Westenberg pm တွင်, Rombouts လုပ် SA ။ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကာလအတွင်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်စွမ်းဆောင်ရည်ညှိနှိုင်းမှုထောက်ပံ့အာရုံကြောယန္တရားများ။ သိမှု၊ 2008;8(2): 165-177 ။
Cunningham MG, Bhattacharyya S ကိုစေလွှတ် FM ရေ။ မွေးဖွားနှင့်လူကြီးအကြား GABAergic interneurons နှင့်အတူ amygdalar afferents ၏တိုးပွားလာ Interaction ။ ဦးနှောက် Cortex ။ 2008;18: 1529-35 ။ [PubMed]
DeWit DJ သမား, Adlaf EM, Offord DR, Ogborne AC အ။ ပထမဦးဆုံးအရက်ကိုအသုံးပြုခြင်းမှာအသက်အရွယ်: အရက်မမှန်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အန္တရာယ်အချက်။ စိတ်ရောဂါကုသမှု၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 2000;157: 745-50 ။ [PubMed]
ဒိုဟာဆီဂျေ, Ogbomnwan Y ကို, Williams က B, Frantz K. ခေတ်-မှီခိုမော်ဖင်းအကိုက်စားသုံးမှုနှင့် cue-သွေးဆောင် reistatement, ဒါပေမယ့်မရစားသုံးမှုအတွက်တင်းမာမှု, Bu ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးကြွက်များ။ ဆေးဝါးဗေဒ, ဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 2009;92: 164-172 ။
Doremus-Fitzwater TL, လှံ LP ။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်မက်လုံးပေးစိတ်ခွန်အားနိုးဖြစ်စဉ်များ: compulsive နိမိတ်လက္ခဏာကို-ခြေရာခံသည့်သဘာဝဆုလာဘ်များအတွက်အပေါ်စိတ်ကြွဆေးအကဲဆတ်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ အာရုံကြောသိပ္ပံများအတွက် Society ၏နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးတွင်တင်ပြပိုစတာ; ဝါရှင်တန်ဒီစီ။ နိုဝင်ဘာ, 2008 ။
Doremus-Fitzwater TL, လှံ LP ။ ကြိုတင်လှုံ့ဆော်အကဲဆတ်ခြင်းတစ်ဦးသမိုင်းနှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးကြွက်များတွင်နိမိတ်လက္ခဏာကို-ခြေရာခံအပြုအမူ၏ expression ။ အမူအကျင့်ဦးနှောက်သုတေသန တည်းဖြတ်မူအောက်မှာ။
Doremus TL, Brunell SC, Rajendran P ကို, လှံ LP ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်မှဆယ်ကျော်သက်ဆွေမျိုးအတွက်မြင့်မားသောအီသနောစားသုံးမှုလွှမ်းမိုးအချက်များ။ လက်တွေ့နှင့်စမ်းသပ်သုတေသနရက်။ 2005;29: 1796-808 ။
ဒေါက်ဂလပ် LA က, Varlinskaya EI, လှံ LP ။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူသည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်များတွင်ဝတ္ထု-အရာဝတ္ထုရာအရပျအေးစက်: လူမှုရေးအထီးကျန်ဆိုးကျိုးများ။ ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 2003;80: 317-25 ။ [PubMed]
ဒေါက်ဂလပ် LA က, Varlinskaya EI, လှံ LP ။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူသည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်များတွင်လူမှုရေး interaction က၏အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောဂုဏ်သတ္တိများ: ဘာသာရပ်များနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏အိုင်ဆိုလိတ်အိုးအိမ်သာရှိပြီးပြည်ပမှလူမှုရေး၏သက်ရောက်မှု။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ Psychobiology ။ 2004;45: 153-62 ။ [PubMed]
Ellgren M က, Artmann တစ်ဦးက, Tkalych အို Gupta တစ်ဦးက, Hansen HS, Hansen SH, ဒေဝီ LA က, Hurd YL ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း endogenous cannabinoid နှင့် opioid mesocorticolimbic စနစ်များ dynamic အပြောင်းအလဲများကို: THC ဆိုးကျိုးများ။ ဥရောပ Neuropsychopharmacology ။ 2008;18: 826-34 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Epstein ဂျာဘန် H ကို, Botvin GJ ။ ဘယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များအလယ်အလတ်သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်အတွင်းစိတ်-မြို့မြီးကောင်ပေါက်အကြားဥစ္စာအသုံးပြုမှုကိုထိခိုက်စေ? စွဲလမ်းစေအပြုအမူ။ 2007;32: 700-713 ။ [PubMed]
Ernst M က, လှံ LP ။ စနစ်များဆုချ။ က de ဟန် M က, ဂန်းနား MR, အယ်ဒီတာများ in: ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာမှ neuroscience ၏လက်စွဲစာအုပ်။ နယူးယောက်: Gilford စာနယ်ဇင်း; 2008 ။
Fidler TL, Bakner L ကို, Cunningham CL ။ ကြွက်များတွင်အီသနော၏ intragastric အုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်သွေးဆောင်အေးစက်သောအရပ်ခြင်းကိုမနှစ်သက်။ ဇီဝကမ္မဗေဒ, ဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 2004;77: 731-743 ။
Flagel SB, Akil H ကို, ရော်ဘင်ဆင် TE ။ တွေကို-related ဆုချဖို့မက်လုံးပေး salience များ၏ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုများတွင်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု: စွဲများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Neuropharmacology ။ 2009;56: 139-148 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Flagel SB, Watson ဟာ SJ, Akil H ကို, ရော်ဘင်ဆင် TE ။ အကျိုးကို-related cue ဖို့မက်လုံးပေး salience များ၏ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုများတွင်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု: ကင်းာင်းအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ အမူအကျင့်ဦးနှောက်သုတေသန။ 2008;186: 48-56 ။
Flagel SB, Watson ဟာ SJ, ရော်ဘင်ဆင် TE, ပန်းတိုင် vs အချက်ပြမှုများကိုချဉ်းကပ်ဖို့ propensity အတွက် Akil အိပ်ချ်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုကြွက်များ၏ dopamine စနစ်ကွဲပြားခြားနားအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်မြှင့်တင်ရန်။ Psychopharmacology (Berl) 2007;191: 599-607 ။ [PubMed]
Frantz KJ, O'Dell LE, Parsons LH ။ periadolescent နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်ကင်းရန်အမူအကျင့်များနှင့် neurochemical တုံ့ပြန်မှု။ Neuropsychopharmacology ။ 2007;32: 625-37 ။ [PubMed]
ဖူ XW, Brudzynski သည် SM ။ ကြွက်များတွင် intracerebral အချိုမှုအားဖြင့်သွေးဆောင် high-အကြိမ်ရေ ultrasonic အသံ။ ဆေးဝါးဗေဒ, ဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 1994;49: 835-41 ။
သွပ်ရည်စိမ်တစ်ဦးက, Hare က TA, Parra အီး, Penn J ကို, Voss H ကို, ဂလိုဗာ, G, Casey BJ ။ orbitofrontal cortex မှဆွေမျိုးအဆိုပါ accumbens ၏အစောပိုင်းကဖှံ့ဖွိုးတိုးတမြီးကောင်ပေါက်အတွက်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပြုအမူအခြေခံလိမ့်မယ်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2006;26: 6885-92 ။ [PubMed]
စမ်းသပ်လေ့လာမှု: Gardner က M, Steinberg အယ်လ်အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေ, စွန့်စားမှု preference ကိုနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူကြီးအတွက်အောင်အန္တရာယ်များဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု Peer ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစိတ်ပညာ။ 2005;41: 625-35 ။ [PubMed]
Gianoulakis C. Endogenous opioids နှင့်အရက်နှင့်အလွဲသုံးစားမှုအခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများမှစွဲလမ်း။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဓါတုဗေဒအတွက်လက်ရှိခေါင်းစဉ်များ။ 2004;4: 39-50 ။ [PubMed]
Grant က BF, Stinson FS, Harford TC ။ တစ်ဦး 12 နှစ်နောက်ဆက်တွဲ: အရက်သုံးစွဲခြင်း၏စတင်ခြင်းနှင့် DSM-IV အရက်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်မှီခိုမှာအသက်အရွယ်။ ပစ္စည်းအလွဲသုံးမှု၏ဂျာနယ်။ 2001;13: 493-504 ။ [PubMed]
အစိမ်းရောင် AS, ဂရေဟမ် NJ ။ ကြွက်များတွင်အီသနောအရက်သောက်: အခမဲ့-ရွေးချယ်မှုအီသနော၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှုမှဆက်စပ်သောက်သုံးသလဲ? အရက်။ 2008;42: 1-11 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ကင် HJ, Berridge KC ။ အာခေါင်၏အာရုံကြောထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုအတိုင်းအတာအဖြစ် reactivity ကိုမြည်းစမ်း။ Psychobiology နှင့်ဇီဝစိတ်ပညာတိုးတက်မှု။ 1985;11: 1-61 ။
ကင် HJ, Norgren R. အဆိုပါအရသာ reactivity ကိုစမ်းသပ်။ အာရုံကြောသာမန်ကြွက်များတွင် gustatory လှုံ့ဆော်မှုမှဗြဲ Mimetic တုံ့ပြန်မှု။ ဦးနှောက်သုတေသန။ 1978;143: 263-79 ။ [PubMed]
Grosbras MH, Jansen က M, Leonard, G, McIntosh တစ်ဦးက, Osswald K ကို Poulsen ကို C, Steinberg L ကို, Toro R ကိုစောစောမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုစေ့စေ့ကြည့်ရှုရန်ခုခံ၏ pause တီဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောယန္တရားများ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2007;27: 8040-5 ။ [PubMed]
Hartup WW, ဘဝသင်တန်းအတွက် Stevens N. ချစ်ကြည်ရေးနှင့်လိုက်လျောညီထွေ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းလွှာ။ 1997;121: 335-70 ။
Hittner JB, Swickert R. Sensation အသုံးပြုမှုကိုရှာကြံခြင်းနှင့်အရက်: တစ် Meta-သရုပ်ခွဲပြန်လည်သုံးသပ်။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူ။ 2006;31: 1383-401 ။ [PubMed]
Holdstock L ကို, အီသနောနှင့် D-စိတ်ကြွဆေးမှတုံ့ပြန်မှုအတွက်က de ကျေးအိပ်ချ်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု: တစ်အတွင်းမှာ-ဘာသာရပ်လေ့လာမှု။ လက်တွေ့နှင့်စမ်းသပ်သုတေသနရက်။ 2001;25: 540-8 ။
Holdstock L ကိုဘုရင် AC အ, က de ကျေးအိပ်ချ်ဘာသာရပ်နှင့် / အလယ်အလတ်အကြီးစားနဲ့အလင်းလူမှုရေးသောက်ထဲမှာအီသနောရန်ရည်ရွယ်ချက်တုံ့ပြန်မှု။ လက်တွေ့နှင့်စမ်းသပ် Ressearch အရက်, ။ 2000;24: 789-94 ။
Hollerman JR, Tremblay L ကို, ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူအတွက် Basal ganglia နှင့် orbitofrontal cortex ၏ Schultz ဒဗလျူပါဝင်ပတ်သက်မှု။ ဦးနှောက် Ressearch အတွက်တိုးတက်မှုကို။ 2000;126: 193-215 ။
Holloway KS, Suter RB ။ လူမှုရေးအထီးကျန်မရှိဘဲဆင်းရဲချို့တဲ့ Play: အိမ်ယာထိန်းချုပ်မှု။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ Psychobiology ။ 2004;44: 58-67 ။ [PubMed]
Infurna RN, လှံ LP ။ စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်အရသာဆန္ဒရှိအတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကို။ ဆေးဝါးဗေဒဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 1979;11: 31-5 ။
Johnston ld, O'Malley pm တွင်, Bachman JG, Schulenberg je ။ အလွဲသုံးစားမှု, ni ဏ။ ဃ Bethesda, MD: မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျု, 2008 ။ ဆယ်ကျော်သက်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအပေါ်အနာဂတ်အမျိုးသားရေးရလဒ်များကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း: သော့ခတွေ့ရှိချက်များခြုံငုံသုံးသပ်ချက်, 2007; စ။ 70 ။
Kalivas PW, Volkow N ကို, စွဲလမ်းအတွက် Seaman ဂျေစီမံထားခြင်းမရှိသောလှုံ့ဆော်မှု: prefrontal-accumbens အချိုမှုဂီယာအတွက်ရောဂါဗေဒ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2005;45: 647-50 ။ [PubMed]
ကယ်လီ TH, Robbins, G, မာတင်, CA, Fillmore MT, ယာဉ်ကြော SD, Harrington Ng, Rush CR ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအားနည်းချက်အတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု: D-စိတ်ကြွဆေးနှင့်အာရုံခံစားမှု-ရှာအခြေအနေ။ Psychopharmacology ။ 2006;189: 17-25 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Knutson B က, ပြဇာတ်၏ Burgdorf J ကို, Panksepp ဂျေရှိလာငယ်ရွယ်ကြွက်များတွင်အမြင့်ဆုံးကြိမ်နှုန်း ultrasonic အသံ elicits ။ ဘက်စုံစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 1998;112: 65-73 ။
LaGreca လေး, Prinstein MJ ။ ဆယ်ကျော်သက်ရွယ်တူကျီးကန်းဆက်နွယ်မှု: ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်အပြုအမူနှင့်အတူချိတ်ဆက်နှင့်နီးကပ်ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု။ ကလေးစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 2001;26: 131-43 ။ [PubMed]
လီကို C, Frantz KJ ။ periadolescence စဉ်အတွင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုကင်းဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားအထီးကြွက်များတွင်ရှာကြံကင်း၏ attenuation ပေါက်ဖွား။ Psychopharmacology ။ 2009;2004: 725-733 ။ [PubMed]
Maldonado လေး, Kirstein CL ။ ကိုကင်း-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှုဆယ်ကျော်သက်ပေမယ့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူမဟုတ်အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်ကြိုတင်ကိုင်တွယ်တိုးပွားလာနေသည်။ ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 2005a;86: 568-72 ။ [PubMed]
Maldonado လေး, Kirstein CL ။ ကိုင်တွယ်ဆယ်ကျော်သက်ပေမယ့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူမဟုတ်အထီးကြွက်များတွင်ကင်း-သွေးဆောင်လှုပ်ရှားမှုပွောငျးလဲ။ Physiol ပြုမူနေ။ 2005b;84: 321-6 ။ [PubMed]
မာတင်အက်စ်အက်စ်, Robbins, CA, Kaplan HB ။ လူမှုရေးနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာသိပ္ပံ longitudinal သုတေသန: တစ်ခု interdisciplinary စီးရီး။ နယူးယောက်: Plenum; 1995 ။ မူးယစ်ဆေးဝါး, ရာဇဝတ်မှုနှင့်အခြား deviant အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်: longitudinal လေ့လာမှုများ; စစ။ 145-61 ။
Mathews IZ, ရေ: P, မက်ကော်မစ် CM ။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်များတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုကျော်ဦးနှောက်ထဲမှာ tyrosine hydroxylase immunoreactivity အတွက်စူးရှစိတ်ကြွဆေးနှင့်အသက်အရွယ်ကွဲပြားမှုမှ hyporesponsiveness အတွက်အပြောင်းအလဲများ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ Psychobiology ။ 2009 E-အရက်ဆိုင် (ဇွန် 2, 2009)
Meredith GE, Baldo BA, Andrezjewski ME, ကယ်လီ AE ။ အဆိုပါ ventral striatum နှင့်၎င်း၏ subdivisions ပေါ်သို့မြေပုံအပြုအမူများအတွက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအခြေခံ။ ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ရာထူးအမည်။ 2008;213: 17-27 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al Mohr CD ကို, Armeli S က, Tennen H ကို, ဗိမာနျတျောက M, Todd M က, Clark က J ကို။ အဆိုပါ keg ပါတီကျော်လွန်ရွေ့လျား: ကောလိပ်ကျောင်းအရက်သောက်တွန်းအားတစ်ခုနေ့စဉ်ဖြစ်စဉ်ကိုလေ့လာမှု။ ကိုစှဲအပြုအမူ၏စိတ်ပညာ။ 2005;19: 392-403 ။ [PubMed]
Niculescu M က, Ehrlich ME, Unterwald EM ။ ကြွက်တွေမှာ psychostimulants မှအသက်အရွယ်-တိကျတဲ့အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှု။ ဆေးဝါးဗေဒဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 2005;82: 280-8 ။
Panksepp ဂျေကြွက်များတွင်ကစား၏ ontogeny ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ Psychobiology ။ 1981;14: 327-32 ။ [PubMed]
Panksepp J ကို, Burgdorf ဂျေ 50-kHz chirpin (laugher?) ကြွက်များတွင်အခြေအနေများနှင့်ခြွင်းချက်မရှိကလိခြင်း-သွေးဆောင်ဆုလာဘ်တုံ့ပြန်: လူမှုရေးအိုးအိမ်များနှင့်ယေဘုယျ variable တွေကိုသက်ရောက်မှု။ အမူအကျင့်ဦးနှောက်သုတေသန။ 2000;115: 25-38 ။
Papp က M, စိတ်ကျရောဂါတစ်ခုတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်အတွက် 1-amniocyclopropanecarboxylic အက်ဆစ်နှင့် D-cycloserine ၏ Moryl အီးစိတ်မကျဆေး Antidepressants ကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများ။ ဆေးဝါးဗေဒ၏ဥရောပဂျာနယ်။ 1996;316: 145-51 ။ [PubMed]
Pautassi RM, Myers M က, လှံ LP သို့ Molina JC, လှံ NE ။ ဆယ်ကျော်သက်ရွယ်မဟုတ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်အီသနော-mediated စာစားချင်စိတ်ကိုဒုတိယယူမှုကိုအေးစက်ပြ။ လက်တွေ့နှင့်စမ်းသပ်သုတေသနရက်။ 2008;32: 2016-27 ။
Philpot RM, တုံ့ပြန်မှု phenotype နှင့်ယန္တရားမှုကြီးလျှော့ချသက်ရောက်မှုအပေါ်ဆယ်ကျော်သက်အသစ်အဆန်း-ရှာကြံအပြုအမူ၏ Wecker အယ်လ်မူတည်။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2008;122: 861-75 ။ [PubMed]
JP, Wood က MD, ကောလိပ်ကျောင်းသို့အကူးအပြောင်းကာလအတွင်းလူမှုရေးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုများနှင့်အရက်ပါဝင်ပတ်သက်မှုအကြားဆက်ဆံရေး Capone C. တစ်ဦးကအလားအလာစုံစမ်းစစ်ဆေးကိုဖတ်ပါ။ အရက်အပေါ်လေ့လာရေးဂျာနယ်။ 2005;66: 23-34 ။ [PubMed]
Ristuccia RC, လှံ LP ။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအီသနောမှဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှလုံးခုန်နှုန်းတုံ့ပြန်မှု။ လက်တွေ့နှင့်စမ်းသပ်သုတေသနရက်။ 2008;32: 1807-15 ။
ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC ။ မူးယစ်ဆေးတဏှာ၏အာရုံကြောအခြေခံ: စွဲတစ်ခုမက်လုံးပေး-sensitive သီအိုရီ။ ဦးနှောက်သုတေသန။ ဦးနှောက်သုတေသနဆန်းစစ်ချက်များ။ 1993;18: 247-91 ။ [PubMed]
ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC ။ စွဲလမ်း။ စိတ်ပညာအတွက်နှစ်ပတ်လည်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ။ 2003;54: 25-53 ။
ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC ။ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ စွဲလမ်းမှု၏မက်လုံးပေးာင်းသီအိုရီ: အချို့သောလက်ရှိပြဿနာများကို။ လန်ဒန် Royal Society ၏ဒဿနအရောင်းအဝယ်။ စီးရီး B, ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာသိပ္ပံ။ 2008;363: 3137-46 ။
ရော်ဘင်ဆင် TE, Browman Ke, Crombag HS, မူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေးပတျဝနျးကငျြအခွအေနေဖြင့် psychostimulant အကဲဆတ်ခြင်း induction သို့မဟုတ်ထုတ်ဖော် Badiani အေ Modulation ။ neuroscience နှင့် Biobehavioral ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ။ 1998;22: 347-54 ။ [PubMed]
Rodriguez က de Fonseca က F, Ramos ဂျာဘွန်တစ်ဦးက, ဖာနန်ဒက်ဇ-Ruiz JJ ။ အစောပိုင်း postnatal အသက်အရွယ်ကနေဦးနှောက်ထဲမှာက်ဘ်ဆိုက်များကိုစညျး cannabinoid ၏ရောက်ရှိခြင်း။ Neuroreport ။ 1993;4: 135-8 ။ [PubMed]
Segal BM, Stewart က JC ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်ဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားမှု: ခြုံငုံသုံးသပ်။ ကလေးသူငယ်စိတ်ရောဂါကုသမှုနှင့်လူ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ။ 1996;26: 193 ။ [PubMed]
Shram MJ, Funk: D လီ Z ကိုက Le အေဒီ။ Periadolescent နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်နီကိုတင်း၏အကြိုးနှင့်ဆန္ဒရှိသက်ရောက်မှုတိုင်းတာစစ်ဆေးမှုများအတွက်ကွဲပြားခြားနားတုံ့ပြန်ကြသည်။ Psychopharmacology (Berl) 2006;186: 201-8 ။ [PubMed]
Skara S က, Sussman အက်စ် 25 ရေရှည်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဆေးရွက်ကြီးနှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကာကွယ်တားဆီးရေးအစီအစဉ်ကိုအကဲဖြတ်တဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်။ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုဆေးပညာ။ 2003;37: 451-474 ။ [PubMed]
Smith က GT ကို, Goldman က MS, Greenbaum PE, Christiansen BA ဘွဲ့။ အရက်သောက်ခြင်းမှလူမှုရေးပံ့ပိုးကူညီဘို့မျှော်မှန်း: အမတူကွဲပြား High-မျှော်မှန်း၏လမ်းကြောင်းနှင့်အနိမ့်မျှော်မှန်းမြီးကောင်ပေါက်။ ပုံမှန်မဟုတ်သောစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 1995;104: 32-40 ။ [PubMed]
Smith က KS, Berridge KC ။ အဆိုပါ ventral pallidum နှင့် hedonic ဆုလာဘ်: sucrose "ကဲ့သို့" နှင့်အစားအစာစားသုံးမှု၏ neurochemical မြေပုံ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2005;25: 8637-49 ။ [PubMed]
Smith က KS, Morrell JI ။ နှောင်းပိုင်းတွင် preweanling နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်ကင်းတဲ့အနိမ့်ထိုးဖို့ကနဦးထိတွေ့မှုကာလအတွင်းအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှု။ Neurotoxicology နှင့် Teratology ။ 2008;30: 202-12 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
လှံကို LP ။ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်နှင့်အသက်အရွယ်-related အပြုအမူသရုပ်။ neuroscience နှင့် Biobehavioral ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ။ 2000;24: 417-63 ။ [PubMed]
လှံကို LP ။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲဦးနှောက်နှင့်ဆယ်ကျော်သက်-ပုံမှန်အပြုအမူပုံစံများ: တစ်ဦးဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ချဉ်းကပ်။ ခုနှစ်တွင်: Walker ကအီး, Romer: D, အယ်ဒီတာများ။ ဆယ်ကျော်သက် Psychopathology နှင့် Developing ဦးနှောက်: ဦးနှောက်နှင့်ကာကွယ်ရေးသိပ္ပံပေါင်းစပ်ခြင်း။ နယူးယောက်: အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; 2007a ။ စစ။ 9-30 ။
လှံကို LP ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏ psychobiology ။ ခုနှစ်တွင်: Kline K ကိုအယ်ဒီတာ။ authoritative အသိုင်းအဝိုင်း: တပြင်လုံးကိုကလေးကပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းသည်သိပ္ပံနည်းကျအမှု (ကြီးထွားစေ့စေ့နားထောင်အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ်ရှာဖွေရေးဌာနစီးရီး) နယူးယောက်: Springer ထုတ်ဝေရေး; 2007b ။ စစ။ 263-80 ။
လှံကို LP သို့ဘရိတ် SC ။ Periadolescence: အသက်အရွယ်-မှီခိုအပြုအမူများနှင့်ကြွက်များအတွက် psychopharmacological Response ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ Psychobiology ။ 1983;16: 83-109 ။ [PubMed]
လှံကို LP သို့ Varlinskaya EI ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်။ အရက် sensitivity ကို, သည်းခံစိတ်နှင့်စားသုံးမှု။ အရက်ထဲမှာမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းတိုးတက်မှု။ 2005;17: 143-59 ။ [PubMed]
Stansfield KH, Kirstein CL ။ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်အပြုအမူအပေါ်အသစ်အဆန်း၏ဆိုးကျိုးများ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ Psychobiology ။ 2006;48: 10-5 ။ [PubMed]
Steinberg အယ်လ်သိမှုနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်အကျိုးသက်ရောက်စေဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ သိမှုသိပ္ပံအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း။ 2005;9: 69-74 ။
ဆယ်ကျော်သက်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပေါ် Steinberg L. တစ်ဦးကလူမှုရေးမှ neuroscience ရှုထောင့်။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ 2008;28: 76-106 ။
Steinberg L ကို, မောရစ် AS ။ ဆယ်ကျော်သက်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ စိတ်ပညာ၏နှစ်ပတ်လည်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ 2001;52: 83-110 ။
Takashi LK, Lore RK ။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်များတွင်တိုက်ပွဲများနှင့် agonistic အပြုအမူ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု Play ။ ရန်လိုအပြုအမူ။ 1983;9: 217-27 ။
Tarazi FI, Baldessarini RJ ။ dopamine: D (1) ၏နှိုင်းယှဉ် postnatal ဖွံ့ဖြိုးရေး, D ကို (2) နှင့် D ကို (4) ကြွက် forebrain အတွက် receptors ။ Developmental အာရုံကြောသိပ္ပံ၏အင်တာနေရှင်နယ်ဂျာနယ်။ 2000;18: 29-37 ။ [PubMed]
Teicher MH, Krenzel အီး, Thompson ကအေပီ, Andersen က SL ။ အဆိုပါ peripubertal ကာလအတွင်း Dopamine အဲဒီ receptor တံစဉ်များကိုကြွက်များတွင် NMDA အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့် attenuated မပေးပါ။ neuroscience ပေးစာ။ 2003;339: 169-71 ။ [PubMed]
သီရဲလ် KJ, Okun AC အ, Neisewander JL ။ လူမှုဆုလာဘ်-conditioning ရာအရပျ preference ကို: တစ်မော်ဒယ်ကြွက်များတွင်ကင်းနှင့်လူမှုရေးအခြေအနေတွင်ဆုလာဘ်များအကြားတစ်ဦးအပြန်အလှန်ထုတ်ဖော်။ မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်မူတည်။ 2008;96: 202-212 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
သီရဲလ် KJ, Sanabria က F, Neisewander JL ။ ဆယ်ကျော်သက်အထီးကြွက်များတွင်နီကိုတင်းနှင့်လူမှုရေးဆုလာဘ်များအကြားများ၏ညှိနှိုင်းအပြန်အလှန်။ Psychopharmacology ။ 2009;204: 391-402 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Tomie အေသည် CAM: အလွန်အကျွံ၏တိရိစ္ဆာန်သင်ယူမှုပုံစံနှင့်လူသားတွေအတွက်အကောင်အထည်ဖေါ်-ကူညီမူးယစ်ဆေး-ဆည်းပူးနေ compulsive ။ လက်တွေ့စိတ်ပညာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ 1995;15: 145-67 ။
Tonoue T က, Ashida K ကို Kakino H ကို, ကြွက်များတွင် opioid peptides နေဖြင့်ထိတ်လန့်-ရူးနှမ်း ultrasonic အသံ၏ Hata အိပ်ချ်တားစီး: တစ်ဦးကစိတ်ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှု။ Psychoneuroendocrinology ။ 1986;11: 177-84 ။ [PubMed]
တောရက်စ် OV, Tejeda HA, Natividad LA က, O'Dell LE ။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကာလအတွင်းနီကိုတင်း၏အကြိုးသက်ရောက်မှုမှအားနည်းချက် Enhanced ။ ဆေးဝါးဗေဒဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 2008;90: 658-63 ။
Trimpop RM, Kerr JH, Kirkcaldy bd ။ အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေသည့်အပြုအမူ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး Construction နှိုငျးယှဉျ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်တစ်ဦးချင်းကွာခြားချက်များ။ 1999;26: 237-54 ။
Tseng KY, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း prefrontal cortical interneurons ပြောင်းလဲမှုများ O'Donnell P. Dopamine မော်ဂျူ။ ဦးနှောက် Cortex ။ 2007;17: 1235-40 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Vanderschuren LJ, Niesink RJ, ဗန် Ree JM ။ ကြွက်များတွင်လူမှုရေးကစားအပြုအမူများ၏ neurobiology ။ neuroscience နှင့် Biobehavioral ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ။ 1997;21: 309-26 ။ [PubMed]
ဗန် Duijvenvoorde AC အ, Zanolie K ကို Rombouts လုပ် SA, Crone EA ၏ ME Raijmakers ။ ဆိုးကျိုးသုံးသပ်စိစစ်ခြင်းသို့မဟုတ်အပြုသဘောတန်ဖိုးထားလေးမြတ်? ဖှံ့ဖွိုးတိုးဖြတ်ပြီးတုံ့ပြန်ချက်-based သင်ယူမှုထောက်ပံ့အာရုံကြောယန္တရားများ။ အာရုံကြောသိပ္ပံများ၏ဂျာနယ်။ 2008;28(38): 9495-9503 ။ [PubMed]
et al ဗန် Ree JM, Niesink RJ, ဗန် Wolfswinkel L ကို, ရမ်းဆေးအဲန်အက်ဖ်, Kornet MM, ဗန် Furth WR ။ Endogenous opioids နှင့်ဆုလာဘ်။ ဆေးဝါးဗေဒ၏ဥရောပဂျာနယ်။ 2000;405(1-3): 89-101 ။ [PubMed]
Varlinskaya EI, Falkowitz S က, လှံ LP ။ အီသနော-သွေးဆောင်အရသာဆန္ဒရှိမှဆယ်ကျော်သက်-ဆက်စပ်အာရုံမခံစားနိုင်သော။ အာရုံကြောသိပ္ပံများအတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ပယ်ဖျက်အစည်းအဝေးတွင်တင်ပြပိုစတာ; အတ္တလန်တာ, ဂျော်ဂျီယာ။ အောက်တိုဘာ, 2006 ။
Varlinskaya EI, လှံ LP ။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များ၏လူမှုရေးအပြုအမူအပေါ်အီသနော၏ acute သက်ရောက်မှု: စမ်းသပ်မှုအခြေအနေကိုကျွမ်း၏အခန်းကဏ္ဍ။ လက်တွေ့နှင့်စမ်းသပ် Ressearch ရက်။ 2002;26: 1502-11 ။
Varlinskaya EI, လှံ LP ။ လူမှုရေးပံ့ပိုး, လူမှုရေးတားစီးနှင့် anxiolysis: အီသနော၏လူမှုရေးအကျိုးဆက်များအတွက်ကွာခြားချက်များကြွက်များတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏သင်တန်းကာလအတွင်းပေါ်ပေါက်လာကြသည်။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ Psychobiology ။ 2006;48: 146-61 ။ [PubMed]
Varlinskaya EI, လှံ LP ။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ Sprague-Dawley ကြွက်များတွင်အီသနော၏လူမှုရေးအကျိုးဆက်များမှနာတာရှည်သည်းခံစိတ်။ Neurotoxicology နှင့် Teratology ။ 2007;29: 23-30 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Varlinskaya EI, လှံ LP ။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ Sprague-Dawley ကြွက်များတွင်လူမှုရေးအပြန်အလှန်: လူမှုရေးဆင်းရဲချို့တဲ့မှုသက်ရောက်မှုများနှင့်စမ်းသပ်မှုအခြေအနေတွင်ကျွမ်း။ အမူအကျင့်ဦးနှောက်သုတေသန။ 2008;188: 398-405 ။
Varlinskaya EI, လှံ LP ။ Kappa opioid receptors နှင့်လူမှုရေး anxiogenesis ၏ Pharmacological activation: အသက်သက်ရောက်မှု, လိင်နှင့်ထပ်ခါတလဲလဲစိတ်ဖိစီးမှု။ အာရုံကြောသိပ္ပံများအတွက် Society ၏နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးတွင်တင်ပြပိုစတာ; ချီကာဂို, IL ။ 2009 ။
Varlinskaya EI, လှံ LP သို့လှံ NE ။ ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်များတွင်လူမှုအပြုအမူနှင့်လူမှုရေးလှုံ့ဆျောမှု: အိမ်ယာအခြေအနေများနှင့်မိတ်ဖက်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုအခန်းကဏ္ဍကို။ Physioloy နှင့်အပြုအမူ။ 1999;67: 475-82 ။
Vastola BJ, ဒေါက်ဂလပ် LA က, Varlinskaya EI, လှံ LP ။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်နီကိုတင်း-သွေးဆောင် conditional ရာအရပျ preference ကို။ ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 2002;77: 107-14 ။ [PubMed]
Vetter CS, Doremus-Fitzwater TL, လှံ LP ။ စဉ်ဆက်မပြတ်, မိမိဆန္ဒအလျောက်-access ကိုအခြေအနေများအောက်တွင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်မှဆယ်ကျော်သက်ဆွေမျိုးအတွက်မြင့်မားသောအီသနောစားသုံးမှု၏အချိန်သင်တန်း။ လက်တွေ့နှင့်စမ်းသပ်သုတေသနရက်။ 2007;31: 1159-68 ။
Vetter-O'Hagen CS, Varlinskaya EI, လှံ LP ။ အီသနောစားသုံးမှုနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူကြီးစဉ်အတွင်းဆန္ဒရှိသက်ရောက်မှုမှ sensitivity ကိုအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု။ အရက်နှင့်အရက်။ 2009 (စာနယ်ဇင်းအတွက်)
Volkow ND, et al ဝမ် GJ, Telang က F, မုဆိုး JS, Logan J ကို, ဂြနျေး M က။ detoxified အရက်သမားအတွက် striatum အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက်လေးနက်လျှောက်လျော့နည်း: ဖြစ်နိုင်သော orbitofrontal ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ အာရုံကြောသိပ္ပံများ၏ဂျာနယ်။ 2007;27: 12700-12706 ။ [PubMed]
Willey AR, Varlinskaya EI, လှံ LP ။ လူမှု interaction ကများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင် 50 kHz ultrasonic အသံ။ အမူအကျင့်ဦးနှောက်သုတေသန။ 2009;202: 122-129 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Willner P ကို, မျက်နှာသုတ်ပုဝါတစ်ဦးက, Sampson: D, Sophokleous S က, မပ်စ်ကတ် R. နာတာရှည် unpredicatble ပျော့စိတ်ဖိစီးမှုများက sucrose preference ကို၏လျှော့ချရေးနှင့်သုံးဘီးဆိုင်ကယ်လက္ခဏာအားဖြင့်ယင်း၏ပွနျလညျထူထောငျ။ Psychopharmacology ။ 1987;93: 358-64 ။ [PubMed]
Wilmouth အီး, လှံ LP ။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင် Hedonic sensitivity ကို: အရသာ reactivity ကိုများနှင့်မိမိဆန္ဒအလျောက် sucrose စားသုံးမှု။ ဆေးဝါးဗေဒ, ဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 2009;92: 566-573 ။
Zakharova အီး, Leoni, G, Kichko ငါ conditional ရာအရပျ preference ကိုနှင့် locomotor လှုပ်ရှားမှုအရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အထီးကြွက်အပေါ်စိတ်ကြွဆေးနှင့်ကိုကင်းများ၏ Izenwasser အက်စ် Differential ဆိုးကျိုးများ။ အမူအကျင့်ဦးနှောက်သုတေသန။ 2009a;198: 45-50 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Zakharova အီး, Wade: D, Izenwasser အက်စ်ထိခိုက်လွယ်မှုကင်းအေးစက်ဆုလာဘ်မှလိင်နှင့်အသက်အရွယ်ပေါ်မူတည်ပါသည်။ ဆေးဝါးဗေဒ, ဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 2009;92: 131-134 ။
Shippenberg TS, Zapata တစ်ဦးက, Chefer VI ကို။ Dynorphin နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်း၏ pathophysiology ။ ဆေးဝါးဗေဒ & ကုထုံး။ 2007;116: 306-321 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Zapata တစ်ဦးက, Shippenberg TS ။ Endogenous Kappa opioid အဲဒီ receptor စနစ်များကိုအီသနောမှ mesoaccumbal dopamine အာရုံခံ၏တုန့်ပြန် modulate ။ လက်တွေ့နှင့်စမ်းသပ်သုတေသနအရက်, ။ 2006;30: 592-597 ။
Zigmond MJ, Abercrombie ED, Berger TW, ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို, Stricker EM ။ အချို့လက်တွေ့နှင့်အခြေခံဂယက်: ဗဟို dopaminergic အာရုံခံ၏တွေ့ရှိရပါသည်ပြီးနောက်လျော်ကြေး။ အာရုံကြောသိပ္ပံအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း။ 1990;13: 290-6 ။
Zombeck ဂျာ Gupta T က, Rhodes JS ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီး C57BL / 6J ကြွက်နှိုင်းယှဉ်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်စိတ်ကြွဆေးနှင့်ကိုကင်းကနေလျှော့ locomotor ဆွများအတွက် pharmacokinetic အယူအဆ၏အကဲဖြတ်။ Psychopharmacology (Berl,) 2009;201: 589-99 ။ [PubMed]